▼ Aug 12 - Aug 19 (24)
မလေးရှားက မြန်မာတွေကို ကုလားတွေသတ်အောင် ကြိုးကိုင်...
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဖြစ်မှူ ဥပဒေ(PDF file)
ကလေး အဖေ ဘယ်သူလဲ
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ တက္ကသိုလ် တစ်ခုမှ သမ္မတဦးသိန်းစိန...
ပါတီဝင် ၂၀၀ ကျော် NLD ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မတီကို ...
အစ္စလာမစ် မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်း နိုင်ငံတေ...
တိုက်တန်းနစ် 3D အား မြန်မာပြည်တွင်ပြသရန် နှစ်ဆယ်ရာ...
KIA မှ ဂိတ်များတွင် ခရီးသွားများပေါ် ငွေမပေးမနေရ ကေ...
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် လာပါကခုခံရန် ...
ဆွေ(လေးဝတီ) (သို့မဟုတ်) ရခိုင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်သူနှ...
အလုပ်မရှိ .. ဘွဲ့ရပညာတတ်ဆို သူများအတွက်
ထို့ကြောင့် မြန်မာပြည် စတုတ္တမဏ္ဍိုင်ဟု ခေါ်သည်
ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်းပြောတဲ့ "ဘယ်သူ့ကိုလာဘ်ပေးရလဲ တ...
၂၀၁၂ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဆရာများနေ့အထိမ်းအမှတ် ဆောင်း ပါးပြိ...
လက်တွေ့ကွင်းဆင်းသတင်းမယူပဲ လေဖမ်းတရားနာ သတင်းရေးတဲ...
အမေရိက မှ အမေရိက ဖြစ်နေသူတွေ ဒါတွေကိုရောသင်သိပါရဲ့...
NLD ပါတီဝင်များ ၄င်းတို့ပါတီကိုပြန်လည် ဆန္ဒပြပြီ
သူတို့တွေ ၈၈ မျိုးဆက်တွေလား
သူတို့တွေ ခေါင်းဖြတ်တာကို မမြင်ဖူးဘူး..သူတို့တွေ အစိုးရအဆောက်အဦတွေ စက်ရုံတွေ မီးရှို့တာ မသိ
ဘူး..သူတို့တွေ မြောက်ဥက္ကလာ ရဲစခန်းကို ဝင်စီးပြီး ရဲကြပ်ကြိးကို ခေါင်းဖြတ်သွားတာ မသိဘူး..ကုန်သွယ်
ရေးရုံးက လုံခြုံရေး သေနတ်တွေကို လက်မောင်းနဲ့ခေါင်းမှာ ခွက်လက်စွဲကာ ပြေးနေတဲ့ဒေါင်းတံဆိပ်နဲ့
၂ဝါမကျော်တဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ ဝင်လုသွားတာကိုမသိဘူး...။ အဲလို အဖြစ်တွေက ၈၈ ကျောင်းသားတွေ ပါးစပ်အဖြူထည်တွေထဲမှာ ဖာသယ်မတစ်ယောက်ပါးစပ်ထဲ ယောကျာင်္းအဂါင်္တစ်ခုဝင်နေသလို ဆို့နေပြီး
အခုထိ ဘယ်သူမှဝန်မခံ ထုတ်မပြောပဲ အစိုးရကဘယ်လိုလုပ်တာ.စစ်တပ်က ဘယ်လိုပစ်တာပဲ ပြောတတ်တဲ့ မေ-ပေးများကနေပြီး ၈၈ မျိုးဆက်ဆိုပြီး
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 8:59 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်(ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာဝန်ခံ) ဦးအောင်သိန်းလင်း၏Southern Weekend(China)တရုတ်သတင်းစာပါပြောကြားချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၏ အစီရင်ခံစာ ရည်ညွှန်းချက်၁။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဋ္ဌာနချုပ်၏ (၂၈.၇.၂၀၁၂) ရက်စွဲပါ၊ စာအမှတ်၊၁၁/၇/ ပြည်ခိုင်ဖြိုး/၂၀၁၂(၁၀၄)
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင်များ၂။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ကို အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းပါသည်-
စွပ်စွဲခံရသူ၃။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်(ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတာဝန်ခံ) ဦးအောင်သိန်းလင်း
စုံစမ်းဖေါ်ထုတ်ရန်အချက်များ၎။ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးအောင်သိန်းလင်းနှင့် Southern Weekend(China)ဟု ဖေါ်ပြထားသော တွေ့ဆုံမေးမြန်းမှု ရေးသားဖေါ်ပြချက်များအား Internet စာမျက်နှာများနှင့် ပြည်တွင်းဂျာနယ်များတွင် ဖေါ်ပြထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အောက်ပါတို့ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်ပါသည်-
စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များ၅။ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့သည် ဦးအောင်သိန်းလင်းထံမှ ထွက်ဆိုချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုး စေလျှက် ရယူပြီး ပူးတွဲ(က)အတိုင်းတင်ပြပါသည်။
ဖြေ။ တရုတ်သတင်းစာနှင့်ဂျာနယ်များသည် တရုတ်အစိုးရ၏ဘက်တော်သားများ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့် မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို အရမ်းပြန်လုပ်ချင်နေ သဖြင့် မြစ်ဆုံဘက်ကိုလမ်းကြောင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းများ ရှာဖွေလျှက် ရှိကြောင်း၊ တရုတ်အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရအပေါ် အနောက်နှင့်ဆက်ဆံ ပြီး သူတို့ကိုဖယ်နေသည်ဟု ထင်မြင်ရပါကြောင်း၊ သို့ဖြစ်ပါ၍ Southern Weelend(China)မှ မြစ်ဆုံကိစ္စအပေါ် ဦးအောင်သိန်းလင်းအား ဆွဲယူအသုံးချ ၍ မေးမြန်းသွားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါသည်။
ဖြေ။ မြစ်ဆုံကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ Southern Weekend(China)၏ ဖေါ်ပြချက်ပါ ဦးအောင်သိန်းလင်းပြောခဲ့သည်ဆိုသည့်အတိုင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတတစ်ဦးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ပါ။ လွှတ်တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက်မဟုတ်ပါ။ ``မြစ်ဆုံဆည်ကို မဖြစ် မနေပြန်လည်တည်ဆောက်ရမည်´´ဟု ဖေါ်ပြခဲ့ပါသည်။
မေး။ ဂျာနယ်တွင် နိုင်ငံရေးလေ့လာသူတစ်ဦးက သုံးသပ်သည်ဆိုပြီး``သူတို့ထပ်နိုင် ရင် ဒီမြစ်ဆုံဆည်ကို မဖြစ်မနေဆောက်မယ်လို့ ဦးအောင်သိန်းလင်းကဆိုရင် ၂၀၁၅ အတွက်အဖြေကထွက်ပြီးသားပဲပေါ့။ ပြိုင်စရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး´´ ဟု ဖေါ်ပြထားခြင်းမှာ ဘာကိုရည်ရွယ်ပါသလဲ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 6:30 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
၂၀၁၂ မေလနှင့် ဇွန်လများတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များ၊ ပဋိပက္ခများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်အမှန် ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် သီးခြားလွတ်လပ်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းသည့် အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် (၅၈/၂၀၁၂) ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးမှ ယနေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။
၁။ ဒေါက်တာမျိုးမြင့် ( သမိုင်းပညာရှင်၊ ညွှန်ချုပ်(အငြိမ်းစား))
၂။ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်( Myanmar Egress )
၃။ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော် ဦးကျော်ညွန့်( ဂျပ်ဆင်ဘုရားကျောင်း)၊
၄။ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော် ဦးစောမာဂေကြီး (မြန်မာဘက်(ပ်)တစ်(စ်)ကွန်ဗင်းရှင်း)
၅။ ဦးသိန်းထွန်း( စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်)
၆။ ဆရာ မောင်ဝံသ(စာနယ်ဇင်း)
၇။ အနုပညာရှင် ဇာဂနာ( ဟာသ လူပျက်)
၈။ ဦးခွန်ထွန်းဦး(SNLD ဥက္ကဌ)
၉။ ဒေါ်သန်းသန်းနု(ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) )
၁၀။ ဦးခင်မောင်ဆွေ ( NDF ဥက္ကဌ)
၁၁။ ဒေါက်တာ အေးမောင် (ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ )
၁၂။ ဦးအေးသာအောင် (ရခိုင်ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် )
၁၃။ ဦးကိုကိုကြီး (၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့ )
၁၄။ ဒေါက်တာ ရင်ရင်နွယ် ( UMFCCI )
၁၅။ ဒေါက်တာဆလိုင်းမူးကျုံးလျန် (နိုင်ငံတာဥပဒေကျွမ်းကျင်သူ)
၁၆။ ဦးတင်အောင်မိုး (သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်)
၁၇။ ဦးအောင်နိုင်ဦး (ဗဟုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့)
၁၉။ ဒေါ်ဂျာနန် (ငိမ်းဖောင်ဒေးရှင်း )
၂၀။ ဦးထွန်းအောင်ချိန် ( မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်)
၂၁။ ဟာဂျီ ဦးညွန့်မောင်သျှိန် (အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ်)
၂၂။ ဟာဂျီ ဦးတင်မောင်သန်း (အစ္စလာမ်သာသနာရေးရာကောင်စီဌာနချုပ်)
၂၃။ ဟာဂျီ ဦးလှဝင်း (မြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသားရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် )
၂၄။ ဦးကျော်ခင် (မြန်မာမွတ်စလင်အမျိုးသားရေးရာ အဖွဲ့ချုပ် )
၂၅။ ဟာဂျီ ဦးမြင့်ထွန်း( မြန်မာမွတ်စလင်လူငယ်များ(ဘာသာရေး)အဖွဲ့ချုပ်)
၂၆။ ဦးလှဝင်း ( မြန်မာမွတ်စလင်လူငယ်များ(ဘာသာရေး)အဖွဲ့ချုပ် )
၂၇။ ဒေါက်တာလှထွန်း(သနန္တရဓမ္မပါလက(ဟိန္ဒူ)အဖွဲ့ချုပ် )
နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရတို့အနေဖြင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်၏ လုံခြုံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးမည် ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများကို ကော်မရှင်အနေဖြင့် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာကို နိုင်ငံတော်သမ္မတထံသို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ အရောက် တိုက်ရိုက်အစီရင်ခံတင်ပြရမည် ဖြစ်သည်။ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အပြည့်အစုံအား နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ အောက်ပါ လင့်တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:55 PM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
မလေးရှားက မြန်မာတွေကို ကုလားတွေသတ်အောင် ကြိုးကိုင်ပေးနေတဲ့ လူတစ်ဦး
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ကုလားများမှ မြန်မာများအား သတ်ဖြတ်မှူကို တိုက်တွန်းနေသူ ၊ နောက်ကွယ်မှ စနစ်တကျ ကြိုးကိုင်နေသူမှာ ဒေါက်တာ ကိုကိုကြီး ဆိုသူဖြစ်ပြီး အသတ်ခံရသူများ အသက်အန္တရာယ်ခြိမ်းခြောက်ခံရသူများနှင့် ခြောင်းရိုက် ဓါးထိုးခံရသူများမှာ ၄င်းနှင့် ဘင်္ဂလီကိစ္စနှင့် စကားများခြင်း ရန်ဖြစ်ခြင်း အွန်လိုင်းတွင် ပြဿနာတတ်ဖူးခြင်း ရှိသူများသာ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။ ကုလားများအား မြန်မာ တို့၏ အလုပ်နေရာ အဆောင်များ အိမ်ခန်းများ အလုပ်ပြန် အလုပ်သွားချိန်များကို စာရင်းပြုစုကာအာပတ်လွတ် စီစဉ်ပေးနေသူလည်းဖြစ်သည် ။ထို့ကြောင့် မလေးရှားရောက်မြန်မာများမှ ထိုသူအား မိမိနည်း မိမိဟန်ဖြင့် ကြဉ် သွားကြပါရန် ကျွန်ုပ်တို့မှ ကျောင်းထိုင်ဘုန်းကြီးမှ ကျောင်းသားအား
အာပတ်လွတ်ပြောသည့်နည်းဖြင့် လမ်းညွန်လိုက်ပါသည် ။ယခု သူ၏ ဖေ့ဘုတ် ပရိုဖိုင်အား ပြပါမည် ။
ဒီပုံကတော့ သူ့ရဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှူပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ။သူဟာ မကျေနပ်သော မြန်မာဆိုလျှင် နေရပ်လိပ်စာ
စုံစမ်းကာ မလေးရှားမှ ဟု သေချာလျှင် ဖုန်းဆက်၍ တသွယ် မက်ဆေ့ပို့၍ တစ်နည်း အသက်အန္တရယ် ခြိမ်းခြောက်တတ်ပါသည် ။ထူးဆန်းသည်မှာ ထိုသို့ ခြိမ်းခြောက်ခံရသည့်နောက်ပိုင်းတွင်
ခြိမ်းခြောက်ခံရသူသည် ကုလားများ၏ ဒုက္ခပေးခြင်းကို ခံကြရသည်ချည်းဖြစ်သည် ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ပုဂ္ဂိုလ်၏ အကြောင်းများ နောက်ခံကိစ္စများကို တတ်နိုင်သမျှ ဖော်ထုတ်ပြီး အမျိုးယုတ်တို့ သွားရာလမ်းကို
မိမိတို့နည်း မိမိတို့ဟန်ဖြင့် ပို့လိုက်ကြပါဟု တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။ ယခုလည်း အမျိုးသမီး ၃ ဦးဆီကို မက်ဆေ့များနှင့် ဖုန်းများဆက်၍ ခြိမ်းခြောက်ထားပါသည်။။မကြာခင် အသက်အန္တရာယ် ကြုံနိုင်ပါသည် ။။
မလေးရှားမှ ညီအကိုမောင်နှမ များ စည်းလုံးမှူ နည်းသလား ။သွေးကြောင်ပါသလား ။ကျွန်ုပ်တို့ကတော့
လမ်းစ နှင့် သဲလွန်စ ပေးလိုက်ပြီ ။သင်တို့ဆီမှ သတင်းကောင်းကို စောင့်မျှော်နေပါသည် ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:43 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 5:50 PM2ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
မန္တလေးတိုင်း ၊ ရမည်းသင်းမြို့နယ် ရှိ သက်ကြားအို ရဟန်းတစ်ပါးသည် သာသနာ ကို အရေခြုံပြီး ၄င်း၏
တဏှာကြောမီး အတွက် ချဲထီ ဂဏာန်း ဝါသနာ ပါသော ခပ်တုံးတုံး ခပ်နုံနုံ သောက်ရှက် ကင်းမဲ့သော မ်ိန်းမတို့နှင့် သမီးရီးစားသဖွယ် ခါးဖက် ၊ နို့ကိုင် ၊ နှုတ်ခမ်းချင်းတေ့စုပ် နမ်းကာ ပေါင်ပွတ်နေပြီး ချဲဂဏာန်း
များပေးနေလျှက်ရှိပါသည် ။ညဉ့်နက်သန်းခေါင်လည်း မိန်းမ များနှင့်စည်းကားနေပြီး အချို့ မာတုဂါမများဆိုလျှင် မနက်မိုးလင်းမှ ဆံပင်ဖို့းရိုးဖားယားနှင့်ပြန်သွားကြကြောင်းလည်း သိုးသိုးသန့်သန့် သိရပါသည် ။ထို့သို့သော သာသနာ အဖျက်သမား နှာဗူးကောင်ကြီးအိုကို မဟာသံဃာနာယကအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ဆရာတော်ကြီးများ နှင့် သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန တို့ ပူးပေါင်းပြီး
သင်္ဃန်းချွတ်ကာ ရဟန်းဘောင်မှသော်လည်းကောင်း လူ့ဘောင်အတွင်းမှာပါ မထားအပ်သော သာသနာဖျက် လူငနွားတစ်ကောင်ကဲ့သို့ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြလိုက်ပါရပါသည် ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:02 PM2ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = ဘာသာရေး
ဘင်္ဂလီဘုတ် ၂-စီးသည် ဘင်္ဂလီအလံများစိုက်ထူပြီး ရသေ့တောင်မြို့နယ် ကုလားချောင်းရွာ (ရခိုင်ရွာ) သို့ ချဉ်းကပ်လာခဲ့ပါသည်။ ယင်းဘုတ်၂-စီးတွင် ဘင်္ဂလီ ၂၀ ခန့် လိုက်ပါလာပြီး၊ သေနတ်များလည်း ပါလာခဲ့သည်။ ကုလားချောင်းရွာသို့ အရောက်တွင် ကုလားချောင်းကျေးရွာ ကင်းအဖွဲ့နှင့် တိုးပြီး ဘင်္ဂလီများက စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ ကုလားချောင်းကျေးရွာရှိ် မုဆိုးများမှလည်
း ယမ်းထောင်းသေနပ်ဖြင့် ခုခံ ပစ်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ အသေအပျောက် လုံးဝ မရှိခဲ့ပါ။
သို့သော် ယင်းဘုတ် ၂-စီးအနက် တစ်စီ (လူမပါ) ကို ဒေသခံ ကျေးရွာသားများမှ ဖမ်းဆီး၍ ၁၅-၈-၂၀၁၂ နေ့ နံနက်တွင် ရသေ့တောင် ရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲပြီး၊ ကျန်ဘုတ် တစ်စီးမှာလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပြေးသွားခဲ့သော ဘင်္ဂလီအချို့ မှာ သေနတ်များဖြင့် မေယုတောင်ပေါ်သို့ တက်ပြေးသွားကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 10:24 PM5ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
၂၀၀၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလက ဂျာမနီနိုင်ငံမှာ နာမည်ကြီးသွားတဲ့ မှုခင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဝမ်းနည်းဝမ်းသာ ဖြစ်ရ တယ့် ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။
တရားရုံးတစ်ရုံးက အမိန့်တစ်ခုချစရာရှိနေပါတယ်။ အမှုကဒီလိုပါ။ ဂျာမနီမှ အလှမယ် တစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် Soupolos ဟာ သားသမီးလိုချင်ပေမယ့် မိမိကိုယ်တိုင်က အမြုံဖြစ်နေလို့ ကလေးမရနိုင်ဘူး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေ
းလိုချင်၊ ဇနီးဖြစ်သူက လည်း ဝမ်းနည်းနေရတဲ့အတွက် မိန်းမရဲ့ လိုအင်ဆန္ဒကိုဖြည့် ဆည်းပေးဖို့ အိမ်ဘေးက သူငယ်ချင်း အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ် ကလေးအဖေ Frank Maus ကို အလုပ် အပ်ပါတယ်။
ယင်းအလုပ်ကတော့ သူ့မိန်းမ အလှမယ်လေးကို တစ်ပတ်သုံးကြိမ် အတူနေခွင့်ပေးတဲ့အပြင် ဒေါ်လာ ၂၅၀၀ ပေးရပါတယ်။
သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတဲ့ ကလေးအဖေ Frank Maus ရဲ့ မိန်းမကလည်း ဒီလိုလုပ်တာကို မကြိုက်ပေမယ့် “ငါဒီအလုပ်တွေ မလုပ်ချင်ပါဘူးမိန်းမရာ ပိုက်ဆံကြောင့်ပါ” လို့ဇနီးကို ချော့မော့ ထားသတဲ့။ ဒါနဲ့...စာချုပ်သက်တမ်း ၆ လ အတွင်း တပတ်သုံးကြိမ်နဲ့ မှန်မှန်ကြိုးစား လာလိုက်တာ ၇၂ ကြိမ်နဲ့ ၆ လသာ ပြည့်သွားတယ်။ ကံဆိုးစွာပဲ အလှမယ်လေး ကိုယ်ဝန်မရခဲ့ပါ။
ဒါနဲ့ ကလေးဖအေ Frank Maus ကို စစ်ဆေးကြည့်လိုက်တော့ သူလည်း အမြုံဖြစ်နေပါတယ်။ အလှမယ် ယောက်ျားက စိတ်ဆိုးပြီး တရားစွဲခဲ့ပါတယ်။ Frank Maus ကလည်း သူ "စွမ်းသလောက် ကြိုးစားမယ်လို့ပဲပြောခဲ့တာ... ကလေးရစေ့ရမယ်လို့ အာမ မခံခဲ့ဘူး" ဆိုပြီး အေးအေးဆေးဆေး တရား ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ အားလုံးက အံ့အားသင့်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ယောက်ကတော့ မအံ့သြဘဲ ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ Frank Maus ရဲ့ ဇနီးသည်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သားသမီး နှစ်ယောက်ထွန်းကားနေတဲ့ Frank Maus က အမြုံဆိုတော့ ကလေးအဖေက ဘယ်သူပါလဲ။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 7:30 PM5ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဖန်တီးလုပ်ကြံထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အသုံးပြုပြီး သတင်းအမှား ထုတ်လွှင့်ခြင်း မပြုရန် ပြည်ပအခြေစိုက် တာလီဘန်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ကြေညာ
ဗုဒ္ဒဘာသာနဲ့ မူဆလင် အုပ်စုတွေအကြား ပဋိပက္ခတွေ ပိုမိုကြီးမား လာအောင် တာလီဘန်တွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို တစ်လွဲအသုံးချပြီး ဆောင်ရွက်နေတာတွေ မပြုလုပ်ဖို့၊ ဒီဓါတ်ပုံတွေကို ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းရှိ သတင်းမီဒီယာများအနေနဲက အသုံး မပြုကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
တာလီဘန် ဘုန်းကြီးတွေ ပါဝင်နေတဲ့ ဒီဓါတ်ပုံတွေကို မူဆလင်နိုင်ငံတွေက ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ ဖြန့်ဖြူးနေတာ ဖြစ်ပြီး အဓိကအားဖြင့် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ဖြစ်စဉ်တွေကို သတင်းတင်ပြရာမှာ လူသေအလောင်းတွေရှေ့မှာ တာလီဘန် ဘုန်းကြီးတွေ မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ အသုံးပြု ဖော်ပြနေကြကြောင်း၊ ယင်းဓါတ်ပုံများမှာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့က တိဗက်အရှေ့ပိုင်း Kyegudo (Yushul) မှာ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့စဉ်က ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဓါတ်ပုံများသာ ဖြစ်ကြောင်း Central Tibetan Administration က ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 6:00 PM3ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ တက္ကသိုလ် တစ်ခုမှ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အားဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ ပေးအပ်ရန်ကမ်းလှမ်း
ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ၏ တက္ကသိုလ် တစ်ခုဖြစ်သည့် Universite de Liege က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းများအား တစ်စိုက်မတ်မတ် ဆောင်ရွက်နေသည့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အားဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ အပ်နှင်းချီးမြှင့်မည့်အကြောင်း သမ္မတထံသို့ တင်ပြမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
သမ္မတအနေဖြင့် လက်ခံမည့်အစီအစဉ် ရှိ၊ မရှိကို တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခနှစ်ဦးက တွေ့ဆုံမေးမြန်းရန် ရောက်ရှိနေကြောင်း မင်္ဂလာမြန်မာမှ ဒါရိုက်တာဒေါက်တာဖုန်းဝင်းက ပြောသည်။ “လက်ခံတယ်ဆိုရင် အဲဒီအဖြေကို ယူသွားမယ်။ ပြီးရင် တရားဝင် ကြေညာလိုက်မယ်။ သူတို့ကတော့ တစ်ချိန်ချိန်မှာလာယူဖို့ မျှော်လင့်တယ်။ အသေးစိတ်တွေကိုတော့ သမ္မတနဲ့တွေ့ရင် သူတို့(ပါမောက္ခတွေ)အနေနဲ့ မေးမြန်းဖို့ရှိတယ်”ဟု ဒေါက်တာဖုန်းဝင်းက ပြောသည်။
ယင်းတက္ကသိုလ်သည် ဥရောပတွင် အဆင့် ၈၁ ရှိပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၀၀ ကျော်တွင် ရပ်တည်လျက်ရှိသည့် တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ တက္ကသိုလ်က ကမ္ဘာကျော် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည့် တောင်အာဖရိကသမ္မတဟောင်း နယ်လ်ဆင်မင်ဒဲလားနှင့် ပါလက်စတိုင်းခေါင်းဆောင် ယာဆာအာရာဖတ်တို့အား ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဒေါက်တာဘွဲ့ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဆိုဗီယက်သမ္မတဟောင်း မစ်ခေးလ်ဂေါ်ဘာချော့အားလည်းကောင်း၊ နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တွင် ၁၀ ကြိမ်မြောက်နေရာ တာဝန်ယူဖူးသူ မစ္စတာ Dominique Strauss Kahn နှင့် အမေရိကန်လူမျိုး အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်သည့် Bill Viola တို့အားလည်း ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့ ချီးမြှင့်သည့် အစဉ်အလာများ ရှိခဲ့ကြောင်း မှတ်တမ်းများအရ သိရသည်။
ယခုလာရောက်သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း တက္ကသိုလ်မှ အငြိမ်းစားယူထားသည့် ပါမောက္ခ Albert Corhay နှင့် ပါမောက္ခ EricHaubruge တို့အပြင် အတွင်းရေးမှူးတစ်ဦးတို့ ပါဝင်ကြောင်း၊ အဆိုပါအဖွဲ့သည် ယခုလ ၁၃ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ရောက်ရှိပြီး ၁၅ ရက်တွင် နေပြည်တော်တွင် သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
၎င်းအဖွဲ့ လာရောက်သည့် လေးရက်တာ ခရီးစဉ်အတွင်း စက်မှုတက္ကသိုလ်နှင့် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်မည်ဖြစ်ပြီး အချိန်ရရှိမည်ဆိုပါက ဆေးတက္ကသိုလ်နှင့် စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တို့ကိုလည်း သွားရောက်ရန်ရှိသည်ဟု သိရသည်။ ထို့ပြင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည့် John Hopkins တက္ကသိုလ်နှင့် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးတက္ကသိုလ်တို့ကြားတွင် ပညာရေးကဏ္ဍ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေသည့် Center of Excellence (COE) အစီအစဉ်တွင်လည်း ၎င်းတက္ကသိုလ်က ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ကိုင်ရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပထမဆုံး လာရောက်သည့်နေ့တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်ပြီး COE အစီအစဉ်၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို သိရှိနိုင်ရန် တာဝန်ရှိသူများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် ခရီးစဉ်အတွင်း အဆိုပါတက္ကသိုလ်မှ အဖွဲ့ဝင်များ သမ္မတနှင့် တွေ့ဆုံရန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးစီးဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများနှင့် တွေ့ဆုံရန်အတွက် မင်္ဂလာမြန်မာက စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သမ္မတအား ဂုဏ်ထူးဆောင်အပ်နှင်းမည့် တက္ကသိုလ်သည် ၁၈၁၇ ခုနှစ်တွင် နယ်သာလန်ဘုရင် King Wilhlem က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော အစိုးရတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လက်ရှိတွင် မဟာဘွဲ့ဘာသာရပ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော် သင်ကြားပေးလျက်ရှိပြီး ပါရဂူဘွဲ့ကျောင်းသား ၁၈၀၀ ကျော် သင်ယူလျက်ရှိကာ ကျောင်းသားစုစုပေါင်း နှစ်သောင်းကျော် ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ပါတီဝင် ၂၀၀ ကျော် NLD ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မတီကို ဆန္ဒပြတော့မည်
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ကော့သောင်းမြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချူပ် (NLD) တွင် ခရိုင် / မြို့နယ် ညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာ၌ ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျဟု ဆိုကာ ပါတီဝင် ၂၀၀ ကျော်က ပါတီ ရုံးရှေ့ ၌ သြဂုတ်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ဆန္ဒထုတ်ဖော်မည်ဟု ကော့သောင်းမြို့နယ် NLD မှ ဦးမျိုးလွင်က ပြောကြားသည်။
... NLD ဗဟို၏ ညွန်ကြားမှုဖြင့် တိုင်း ညီလာခံ ကျင်းပရေး ကော်မရှင်မှ ခရိုင် /မြို့နယ် ညီလာခံ ကော်မရှင်အား ဖွဲ့စည်းရာတွင် အများပြည်သူကို ချမပြခြင်း၊ ပါတီဝင်များ သဘောဆန္ဒပါဘဲ လူတစ်စုက လုပ်ဆောင်ကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဦးမျိုးလွင်က ပြောကြားသည်။ “၂၀ ရက်နေ့မှာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ပွဲလုပ်မယ်” ဟု ၎င်း က ဆိုသည်။ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ရန် စာကို သြဂုတ်လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မြို့နယ်ကော်မရှင်နှင့် မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သည်။
“ ပါတီကို ဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး။ ပါတီထဲမှာရှိတဲ့ အထက်ပိုင်းလူတစ်စုကို ဆန့်ကျင်တာပါ ” ဟု ဦးမျိုးလွင်က ဆိုသည်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြောင်းမြမြို့နယ် NLD ညီလာခံ ကျင်းပရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမကျဟုဆိုကာ ပါတီဝင်အချို့ ဆန္ဒပြမှု အပြီး ရက်ပိုင်းအကြာ နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ကော့သောင်းမြို့တွင် ယင်းသို့သော ဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည်။မြောင်းမြမြို့
NLD ပါတီဝင်များ ၄င်းတို့ပါတီအား ပြန်လည်ဆန္ဒပြခြင်းကို ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှူနိုင်ပါသည် ။
ကော့သောင်းခရိုင်/မြို့နယ် ကော်မရှင်ကို အဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦးစီဖြင့် ဖွဲ့စီးပြီး ခရိုင်ကော်မရှင် ဥက္ကဌနေရာကို ရှေ့နေ ဦးခင်ဇော်အား လည်းကောင်း၊ မြို့နယ် ကော်မရှင်နေရာအတွက် ဦးအောင်ရွှေတို့အား အသီးသီး ရွှေးချယ်ထားသည်ဟု သိရသည်။ ယင်းကော်မရှင်မှာ ညီလာခံကျင်းပရေး အတွက် ယာယီသာဖွဲ့စည်းမည့် လုပ်ငန်းကော်မတီဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်စာရင်းကို အချိန်မီပေးအပ်ရန် လိုအပ်သည့်အတွက် အများပြည်သူသို့ ချမပြနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တိုင်းကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် ဦးမောင်မောင်ဦးက ရှင်းပြသည်။
“ဗဟိုကလည်း အများရဲ့ ဆန္ဒယူပြီးတော့ လုပ်ရမယ့် အနေအထားမဟုတ်ဘူး ထင်လို့ ကျွန်တော်တို့ကို ညွှန်ကြားတယ်လို့ ယူဆပါတယ်”ဟု ၄င်းကဆိုသည်။ယင်းမှာ အောက်ခြေပါတီဝင်များ သဘောထားကို
ဒီမိုကရေစီနည်းကျစွာ တောင်းယူခြင်း ဆန္ဒရယူခြင်းတို့မရှိပဲ ဗကပ ကွန်မြူနစ်ဆန်ဆန် အထက်မှချပေးလိုက်သော နိုင်ငံရေးအရာရှိ တစ်ယောက်တစ်ဖွယ် မိမိတို့ ဒေသများသို့ရောက်ရှိလာပြီး
မိမိတို့မျက်နှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံများနှင့် အန်တီစုခြင်းမိုးမွန်အောင် ပြောတတ်သည်မှ အပ မိမိတို့နယ်ခံပါတီဝင်များလောက်ပင် နိုင်ငံရေး အတွေးအခေါ်နှင့်လှုပ်ရှားမှူ ရှိခဲ့သူများမဟုတ်ကြသော
ကြောင့် ပါတီတွင်းမကျေနပ်မှူများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်မှာ ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ မြိတ်ခရိုင်/မြို့နယ် ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်း တာဝန်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို သြဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့၊ ထားဝယ်တွင် ခရိုင်ကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဇူလိုင် ၃ ရက်နေ့တွင် အသီးသီးပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မြို့နယ် ကော်မရှင်ကို ဇူလိုင် ၁၇ ရက်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကော့သောင်ခရိုင်/မြို့နယ် ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းတာဝန် ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနား ကို ကော့သောင်းမြို့၊ ငွေလရိပ်ခန်းမတွင် သြဂုတ်လ ၁၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်ရန်စီစဉ်လျက်ရှိသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 2:49 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
အစ္စလာမစ် မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်း နိုင်ငံတော် အခမ်းအနားတွင်ကြေငြာမည့် မိန့်ခွန်း(သရော်စာ)
အစ္စလာမစ် မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်း နိုင်ငံတော် အခမ်းအနား။ National ceremony of Declaration of Islamic Republic of Burma.
အခုလို အစ္စလာမစ် မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်း အခမ်းအနားကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ အစ္စလာမ်ဝိုင်းတော်သားများ အားလုံးကို ရှလမ် လို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။
အခက်အခဲ၊ အနှောင့်အယှက်လေးတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်း နောက်ဆုံးတေ
ာ့ မြန်မာနိုင်ငံကိုအောင်မြင်စွာ Islamized လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။အခုတော့အားလုံး စိတ်ချသွားရပါပြီ။
ကျုပ်တို့ ရိုဟင်ဂျာ တွေချည်းပဲဆို ဒီလောက်ထိ အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တဲ့ DVB,BBC,IRRAWADDY,MIZZIMA, စတဲ့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များနဲ့ တကွ ပြည်ပက ရိုဟင်ဂျာကိစ္စမှာ အတူတကွ ပူးပေါင်းပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ အစည်းတွေ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဒီနေရာပြောကြားလိုပါတယ်။
အာရပ်အဖွဲ့ ချုပ်က ခိုင်းတဲ့အတိုင်း ခင်ဗျားတို့ DVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzima ၊အဖွဲ့ အားလုံး သေသေချာချာ လှုပ်နိုင်ခဲ့ လို့ အခုလို အောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ Islamized လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ခင်ဗျားတို့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ကို အာရပ်အဖွဲ့ ချုပ် က မွေးခဲ့တာသိပ်ကို မှန်ကန်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ ခင်ဗျားတို့ ကို အာရပ်အဖွဲ့ ချုပ် ကဒေါ်လာသန်းနဲ့ ချီပြီး မွေးရကြိုး ၊ ကုန်ရကြိုး နပ်ပါတယ်။
အစ္စလာမ်မစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ထူထောင်နိုင်ရေး အတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ DVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzimaတို့ ရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ နဲ့ အတူ ရိုဟင်ဂျာ ကို မြန်မာလူမျိုး ဖြစ်အောင် ဥပဒေပြဌာန်း နိုင်ခဲ့လို့ အခုဆိုရင် ဘင်္ဂလီမူဆလင် သန်း ၇သန်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံထဲသွင်းနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ရိုဟင်ဂျာ-ဘင်္ဂလီ သန်း ၇သန်း နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို ၀င်ရောက်နှင့်ပြီးသား မွတ်ဆလင်ညီအစ်ကိုများ Muslim brotherhood များ ပေါင်းစပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို ၁၂ သန်းကျော် ထည့်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကို မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖြစ် ၀င်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သော ၁၂သန်းသော အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ရဲ့ မွတ်ဆလင်သွေးသားတွေဟာ အခုဆိုရင် အမျိုးဆက်နှစ်ခု မွတ်ဆလင်သားဖေါက်ကာ အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ ၆၀% ကျော်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်သွားပါပြီ။ Insha-Allah.
အခုဆိုရင် မြန်မာပြည်မှာ အစ္စလာမ်ဗလီပေါင်း ၂၀၀၀ နှစ်ထောင်နီးပါးဆောက်နိုင်ခဲ့ကာ မြန်မာပြည်လူဦးရေရဲ့ ၆၀% ကျော်ဟာ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဖြစ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံကို Islamic Republic of Burma လို့ တရားဝင် ကြေညာပြီး တရားဥပဒေ ဘောင်ထဲ က အခုလို အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံ အဖြစ်ထူထောင် လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ် ပါတယ်။
ကျန်တဲ့လူနည်းစုဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမျိုးနွယ်စုလေးများမှာ လည်း အရေအတွက်အားဖြင့် မပြောပလောက်တဲ့ လူနည်းစု Minority တွေဖြစ်တဲ့အပြင်
လူနည်းစု ဗုဒ္ဓဘာသာ မြန်မာမျိုးနွယ်စု လေးများမှ မိန်းကလေးများကို လည်း ကျုပ်တို့ မွတ်ဆလင်တွေ က မယားအဖြစ် ပြုထားလို့နောက်မွေးလာမဲ့ မျိုးဆက်များမှာ ဆိုရင် အစ္စလာမ် မျိုးဆက်တစ်ခုတည်း အနေနဲ့ ပေါင်းစည်းသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာ ပဲ အခုလို အစ္စလာမ်မစ် ရှရီးယား ဥပဒေနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ အစ္စလာမ်မစ် မြန်မာ နိုင်ငံတော်ကြီးမှာ အစ္စလာမ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့် ကျင်ကန့် ကွက် ဆန္ဒပြနေတဲ့ 
မွန်၊ရှမ်း၊ ဗမာစတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ မျိုးနွယ်စုလေးများ၊ ကရင်၊ချင်း ကချင်စတဲ့ ခရစ်ယာန်မျိုးနွယ်စုလေးများ စသည်ဖြင့်
အနည်းငယ်သာ ကျန်တော့တဲ့ အသိဥာဏ်ခေါင်းပါးတဲ့...အမြင်ကျဉ်းလှတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုနိမ့်တဲ့...အတွေးအခေါ် အမြင်နိမ့်ကျတဲ့၊ လူမျိုးစွဲ။ ဘာသာစွဲ ..အသိဥာဏ်ခေါင်းပါးတဲ့ မိစ္ဆာဒိဌိ Kafir
အစွန်းရောက် Racists, Neo-fascists, Neo-Nazi, Religious Abuse သမားတွေ ဖြစ်တဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာမျိုးနွယ်စုလေးများကို လည်း
ညီအစ်ကို မွတ်ဆလင်နိုင်ငံများမှ တာလီဘန်၊ ဟားမတ်စ်၊ အယ်ကိုင်းဒါး၊ ဟစ်ဘိုလာ စတဲ့ အစ္စလာမ်မစ် သာသနာစောင့် လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ အစည်းများအကူအညီဖြင့်
ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် ၊ တူရကီရှိ ခရစ်ယာန်အာမေးနီးယားလူမျိုးများ၊ ကက်ရ်ှမီးယား ဟိန္ဒူများ၊ ကိုလုပ်သကဲ့သို့Ethnic Cleansing လုပ်ကာ အစ္စလာမ်မစ် မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ဧ။် အစ္စလာမ်သာသနာ သန့် စင်ရေး အတွက် အနည်းငယ် ကျန်ရှိနေသေး သောခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာမျိုးနွယ်စုလေးများ ကို Ethnic Cleansing လုပ်ကာ လိုက်လံရှင်းလင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ ဘင်္ဂလီ အရေး အတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြတဲ့ DVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzimaတို့ ရဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ ကို အာရပ်မွတ်ဆလင်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှအထူးပင်အားရကျေနပ်လှသောကြောင့် စာချုပ်ပါ ထောက်ပံ့ငွေကြေးများ အပြင်
Islamic Rohingya အရေး ကို အခက်အခဲ အနှောက်အရှက်တွေကြားထဲကနေမှ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ကြတဲ့ DVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzima စတဲ့ အစ္စလာမ် ၀ိုင်းတော်သား များအားလုံးကို အပိုစု Bonus အဖြစ် ယူရို ငွေသန်း-၁၀၀၊ Euro 100 Millions အပိုဆုအဖြစ်ချီးမြှင့်ကြောင်း အစ္စလာမစ် မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်း နိုင်ငံတော်အခမ်းအနား နေ့ မှာ ကြောငြာအပ်ပါသည်.။
ဖြောင်း.....ဖြောင်း.....ဖြောင်း..........ပြည်ပမှဒီမိုကရေစီလုပ်စားများDVB,BBC,VOA,Irrawaddy,Mizzima တို့ ရဲ့ ၀မ်းသာလွန်းလို့ကျတဲ့မျက်ရည်များ ကြားမှ လက်ခုပ်သံများ။
( Ko Soe Win သရော်ရေးသားဖန်တီးသည်)
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 10:00 AM2ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
မိမိကိုယ်မိမိ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဟု ဆိုပါလျက် ရခိုင်/
မြန်မာစကား တစ်ခွန်းမျ မပြောတက်ရုံမက နားပင်မလည်သော စစ်တကောင်းကောလိပ်မှ ၀ိဇ္ဇာဘွဲ့ ယူခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများ၏ ဖန်ဆင်းရှင်၊ ဖုံညိုလိပ်ရွာနေ အဒူဂါဖါရ်မှသည် မိမိကိုယ် မိမိ ခေတ်သစ် သမိုင်းပညာရှင်ဟု ခံယူထားသော ဇော်ဝင်းထွဋ်ဆိုသူ အထိ ခေတ်အဆက်ဆက် လန်ကြုတ် ဖန်တီးခဲ့သည့် ဖြတ်-ညှပ်-ကပ် ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းလိမ်များကို ပြည်တွင်းပြည်ပ(နိုင်ငံခြားသား အပါအ၀င်) သမိုင်း ပညာရှင်များက ဝေဖန်ချေပ ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အဒူဂါဖါရ် ၏ သမိုင်းလိမ်သည် ဆရာ ဦးဖော်ဇံ၏ ချေပမှုအောက်တွင် အရည်ပျော်ကျခဲ့ပြီး၊ ဇော်ဝင်းထွဋ်၏ သမိုင်းလိမ်သည် ဂျပန်နိုင်ငံရောက် ရခိုင်သားများ၏ ထိုးနှက်မှုအောက်တွင် ပျက်စီးခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် ဂျပန်နိုင်ငံတရားရုံးမှ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများကို လူဝင်မှုဥပဒေအရ ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်အခါကလည်း သူတို့သည် ဘင်္ဂလီလူမျိုးသာဖြစ်ကြောင်း ၊ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် လူမျိုးမှာ မရှိကြောင်း ၊မိမိကိုယ်မိမိ ခံယူထားခြင်း သာ ဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးက ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ပါလျှက် အနောက်သတင်းသမားများသည် အမှန်တရားကို မသိ၍လား၊ သိလျက်နှင့် အရွဲ့တိုက်ချင်၍လား ဆက်တိုက် ထုတ်လွင့်နေကြသည်ကို မကြာခဏ ကြားနေရသည်။ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများအကြောင်းကို မြိန်ရေယှက်ရေ တင်ပြနေကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ သမိုင်းဖြစ်ရပ်အမှန်ကို ကွယ်ဝှက်ပြီး အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး သတင်းရေစီးကြောင်းအတိုင်း မျောလိုက်နေကြပါသည်။ ဤရေစီးကြောင်းအတိုင်း မျောလိုက်ရန် ကြိုးပမ်းနေသော ပြင်သစ်နေ လှအောင်ဆိုသူသည် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းလိမ် အခန်းဆက်ကို ဖော်ထုတ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသည်။ သို့ရာတွင် ဘီဘီစီ၏ အင်တာဗျူးတွင် ဒေါက်တာအေးချမ်း၏ ပိတ်ဆို့မူကို မကျော်နိုင်သော လှအောင် သည် “ဘယ်လူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့ မူဆလင်တွေ လူ့အခွင့်အရေးခံစားရရင်တော်
ပါပြီ” ဟူသော စကားဖြင့် သူတို့၏အခန်းကို လျှော့ချပစ်ခဲ့ပါသည်။
သို့သော် အင်္ဂလန်နေ ထွန်းခင်ဆိုသူတစ်ဦးက သူတို့၏အကြမ်းဖက်ဗီဇ ရုပ်ကလေးကို လှစ်ပြခဲ့ပြန်ပါသည်။ ဒေါက်တာအေးချမ်းနှင့် သမိုင်းပညာရှင် အချို့က လန်ဒန်မြို့(SOAS)တက္ကသိုလ်တ
ွင် သမိုင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲကို ထွန်းခင်နှင့် အကြမ်းဖက်သမားတစ်စုက ဗုံးခွဲမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်မှုကြောင့် (၃)နေရာအထိ ပြောင်းရွှေ့ပြီးမှ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထွန်းခင်နှင့် အကြမ်းဖက်သမားများက လိုက်လံ နှောင့်ယှက်မှုကြောင့် ကြန့်ကြာနေခဲ့ရာ နိုင်ငံတကာ သမိုင်းပညာရှင်များ ကူညီမူကြောင့် အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သူတို့သည် ထိုမျှနှင့် မရပ်တန့်နိုင်သေးဘဲ အတ္တလန်တိတ် သမုဒ္ဒရာကို ခုန်ကျော်၍ အမေရိကန်နိုင်ငံ NEW JERSEY ပြည်နယ် ရီပတ်ပလီကန်အမတ် SMITH ကိုချဉ်းကပ်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများအတွက် ဥပဒေတစ်ရပ် တင်သွင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုမှာ အဆိုတစ်ရပ်အဖြစ်သာ အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။
ဘင်္ဂလီဆိုသည်မှာ ဘင်္ဂလားဒေသခံ၊ အနွယ်ဝင်များဖြစ်သည်ကို အားလုံး သိကြပါသည်။ ဂါဖါရ်တို့၏ ဖြတ်-ညှပ်-ကပ် သမိုင်းဇာတ်ခန်းလာ အနွယ်ဝင်များသည် စစ်တကောင်းသား ဘင်္ဂလီများဖြစ်ကြောင်း မည်သူမျှ မငြင်းကွယ်နိုင်သလို ၀န်ခံခြင်းလည်း မပြုနိုင်ကြပါ။ ခပ်မဆိတ်နေကြပါသည်။ အဆိုးဆုံးကား အနောက်မီဒီယာ များဖြစ်ပါသည်။ အနောက်မီဒီယာများသည် သတင်းတစ်ပုဒ် ကိုထုတ်လုပ်ရာ၌ လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်နှင့် သဘာ ၀ယုတ္တိကိုပေါင်းစပ် သင့်ပါသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် လက်တွေ့ဖြစ်ရပ်နှင့် ဆန္ဒစွဲကိုသာ ပေါင်းစပ်လိုက်သည့်အခါ လွဲမှားသော သတင်းမှားနှင့် ဘက်လိုက်သော သတင်းမှားသာ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။ အကြမ်းဖက်သမားကို သနားဖွယ်ရာလူများအဖြစ် ဖန်တီးမိကြပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်အကြို နှင့် စစ်ပြီးခေတ်မှသည် ယနေ့အထိ အကြမ်းဖက်သမား ကုလားဆိုးများရန်ကြောင့် အိုးပစ်အိမ်ပစ်၍ မိမိဇာတိဒေသကိုပါ စွန့်ခွာသွားခဲ့ရသော ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသခံများ၏(IDP)ဖြစ
်နေရသော ဘ၀များကို အနောက်မီဒီယာများ မေ့နေကြဟန်ရှိသည်။ ဝေးလံဒေသရှိ ရခိုင် တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက်သမားများ
၏ လူမဆန်စွာ အဓမ္မကျင့်မှု၊ ရက်စက်စွာ သတ်ဖြတ်ခံရမှု များကိုကား ၊အဆိုပါ အနောက်မီဒီယာများက ဖော်ထုတ်ရန် လက်တွန့်နေကြပါသည်။
မကြာခဏဆိုသလို အနောက်မီဒီယာအသီးသီးမှ ထုတ်လွှင့်နေသော့ လှေစီး ဒုက္ခသည်များကို ကြည့်လျှင် အသက်(၂၀) နှင့် (၄၀)ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျန်းမာ သန်စွမ်းသော သူများဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
သူတို့အထဲတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား လူရွယ်များကို ရိုဟင်ဂျာ အမည်ခံ များအဖြစ် တွေ့နေရပါသည်။ ခေတ်သစ် လှေစီးခရီးသည်များတွင် ကျူးဘားဒုက္ခသည်နှင့် ဗီယက်နမ် ဒုက္ခသည်များကို ကြည့်ပါက မိသားစုအစုံအလင်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုနှင့် ကလေးများပါမကျန် ပါလာသည်ကို တွေ့ရသော်လည်း၊ ရိုဟင်ဂျာလှေစီး ဒုက္ခသည်များထဲတွင်မူ အမြဲတမ်းလိုလို ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား လူရွယ်များကို တွေ့နေရပါသည်။
ဒေသအုပ်စိုးရေးဆိုသည်မှာ လူများစု၊ လူနည်းစုနှင့် မဆိုင် ၊ဒေသခံဟုတ်/မဟုတ် ၊တိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ် နှင့်သာ ဆိုင်သည်။ လူ့အနွယ်စုတစ်ရပ်သည် ထိုဒေသနှင့် ဆက်နွယ်သင့်/
မသင့်(နိုင်ငံသား ဖြစ်ထိုက်/မဖြစ်ထိုက်) ဆိုသည်မှာ မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ ရှိသည်နှင့်လည်းမဆိုင်၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ဟုတ်/မဟုတ် ဆိုသည်နှင့်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာစံနှုန်း ၊ စံညွန်းများ နှင့်လည်းကောင်း ၊ ချိန်ဆရမည်ဖြစ်ပါသည်။ မျိုးဆက်ပေါင်း မည်မျှပင်ရှိသည် ဖြစ်စေ၊ ထိုဒေသနှင့် ဒေသခံများအပေါ် သစ္စာရှိမှု ၊ အေးအတူ ပူအမျှ ယှဉ်တွဲ နေထိုင်လိုမူ ရှိ/မရှိ အပေါ်တွင်သာ မူတည်ပိုင်းဖြတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကြမ်းဖက်ထွန်းခင်နှင့် အပေါင်းပါတို့က အမေရိကန်လွတ်တော်အမတ် (SMITH)ကို အသုံးချလျက် ရိုဟင်ဂျာဆိုသူများက မြန်မာနိုင်ငံရှိ အခြားနိုင်ငံသားများ နည်းတူ အခွင့်အရေးအပြည့်အ၀ပေးရန် တူညီသော နိုင်ငံသား (AS FULL AND EQUAL) အဖြစ် သတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆိုနေကြသည့်နည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ အဖြူရောင် ကတ်ပြား၊(ယာယီမှတ်ပုံတင်)အာ
း အနီရောင် ကတ်ပြား(နိုင်ငံသားကတ်ပြား) အဖြစ် ဘယ်တော့ လဲပေးမှာလဲ ဟု မေးမြန်းခံနေရပြီ ဖြစ်ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ မည်သည့် လူ့အခွင့်အရေးမှ ထူးခြားစွာဆုံးရှံးမခံရဘဲ၊ သူတို့သာလျှင် လူ့အခွင့်အရေးကို အရင့်သီးဆုံးချိုးဖောက်နေသည
်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည်မှာ ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမား များကိုင်စွဲသည့် နောက်ဆုံး ပေါ်လက်နက်တစ်ရပ်သာဖြစ်ပါသည်။
စတင်ချိန်မှစ၍ ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ တဖြည်းဖြည်း ရွှေ့လျားလာကြသော လူ့အဖွဲ့ အစည်းများရှိရာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ အရှေ့ဘင်္ဂလားမှ အစားကျပ်တည်း၊ အနေကျပ်တည်းသော ဘင်္ဂလီများသည် နည်းမျိုးစုံဖြင့် တလိမ့်လိမ့် ၀င်ရောက်လာသည်မှ ရိုဟင်ဂျာအကြမ်းဖက် သမားများသည် လောဘဇောကပ်ပြီး နယ်မြေလုယက်ရေး လုပ်ရပ်ကို စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက်နေသူများ ရှိသလို၊ မိမိတို့၏ မိသားစုဘ၀ အေးချမ်းသာယာရေး ၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် သဟဇာတဖြစ်ရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသော အခြေအနေအောက်တွင် နေထိုင်လိုကြသော မူဆလင် ဘာသာဝင် ပေါင်းများစွာ ရှိသည်ကို ကျွန်တော်ဝန်ခံပါသည်။ အကြမ်းဖက် သမားများနှင့် ရောထွေးလာသောအခါ ကျွန်တော်တို့အဖို့ ခွဲခြားရ ခက်လှပါသည်။ မူဆလင်ဝါဒသည် တခြားဘာသာဝင်များပင် အတုယူစရာဖြစ်သည်ကို ကျွန်တော် တွေ့ဖူးပါသည်။
မူဆလင်ဘာသာဝင်များ မဟုတ်သူများအနေဖြင့်လည်း ဘာသာမတူသူများနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲ နေထိုင်မှုကိုလက်ခံ ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသူများ၏ စစ်မှန်သော လူ့အခွင့်အရေးတောင်းဆိုမှုကိ
ု လက်ခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ တပြိုင်တည်း ဘာသာရေး အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများအား ယှဉ်တွဲ တိုက်ခိုက်ရင်း ငြိမ်းချမ်းသော မေယုဒေသကို တည်ဆောက်သင့်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 8:04 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
တိုက်တန်းနစ် 3D အား မြန်မာပြည်တွင်ပြသရန် နှစ်ဆယ်ရာစုမြေခွေးကုမ္မဏီ စာချုပ်ချုပ်ပြီ
ဆယ်စုနှစ်များစွာအတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီ 20th Century Fox သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ ၄င်းတို့၏ တိုက်တန်းနစ်(သရီးဒီ) ရုပ်ရှင်ကားကို ပြသပေးသွားရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။
သြဂုတ် ၁၃ရက် (တနင်္လာနေ့)က Fox ကုမ္ပဏီသည် ၄င်းတို့၏ဇာတ်ကားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ပြသခွင့်အား မင်္ဂလာကုမ္ပဏီနှင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း၊ လူကြိုက်များသည့် ယင်းတိုက်တန်းနစ်သရီးဒီကားကို သြဂုတ် ၁၇ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပြသမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်း၌ နောက်ဆုံးရုံတင်ပြသခဲ့ဖူးသော အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မှာ မည်သည့်ရုပ်ရှင်ကားမှန်း သေချာမသိရသော်လည်း Fox ၏ ထုတ်ပြန်ချက်၌ ၄င်းတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၌ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ကား ရုံတင်ပြသရန် ဆယ်စုနှစ်များစွာချီ၍ စောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
ကြေညာချက်၌ Fox စတူဒီယို၏ နိုင်ငံတကာပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌ သောမတ်စ်ဂျက်ဂီးယပ်စ်နှင့် ပေါ့လ်ဟန်နန်မန်တို့က “20th Century Fox International ဟာ ပေါ်ထွန်းစ ဈေးကွက်သစ်တွေမှာ စွန့်ဦးတီထွင်သူအဖြစ် ၀င်ရောက်ရတာ၊ ဒေသခံလုပ်ငန်းတွေနဲ့အတူ လက်တွဲလုပ်ပြီး ဒီရှာဖွေမှုတွေကို ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ရတာတွေကို ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန် လက်ထက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ အများကြီး စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းမှာ အာရှကို ကျွန်တော်တ်ို့ ခရီးထွက်တဲ့အခါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသစ်လွင်ဆုံး နယ်နိမိတ်(မြန်မာနိုင်ငံ)ကို သွားလည်ဖို့ရှိပါတယ်”ဟုပြောသည်။ Fox ကုမ္ပဏီသည် ယခု သရီးဒီဖြင့် ပြသမည့် တိုက်တန်းနစ်ကားကို ပါရာမောင့်ရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီနှင့် ပူးတွဲထုတ်လုပ်ထားပြီး၊ နိုင်ငံရပ်ခြားးဖြန့်ချိရေးကဏ္ဍ၌ တာဝန်ယူကိုင်တွယ်ထားသည်။
ကိုးကား- Chicago Tribune/ Los Angeles Time
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 4:26 AM0ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
KIA မှ ဂိတ်များတွင် ခရီးသွားများပေါ် ငွေမပေးမနေရ ကောက်ခံ
ကချင်ပြည်နယ် ဝိုင်းမော်မြို့ ၂၈ မိုင်အကွာ ချီဖွေသွားလမ်းပေါ်ရှိ ကျေးရွာဒေသများတွင် KIA မှ ဂိတ် ၅ ခုထားရှိပြီး ခရီးသွား ပြည်သူများထံ အတင်းအဓမ္မ္မ ငွေကောက်ခံနေကြောင်း သိရသည်။
ချီဖွေသွားလမ်းပေါ်ရှိ မန်ဝီး၊ ဒွမ်ဘန်၊ ခဝါန်၊ ရှဂေါ၊ မန်ဒေါင် (Man Dawng) နေရာများတွင် KIA တပ်များသည် ဂိတ်များချထား၍ ဖြတ်သန်းသွားလာသူများကို စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး ဆိုင်ကယ်မောင်းနှင်သူများနှင့် ၄င်းတို့သယ်လာသည့် ပစ္စည်းများ အပေါ်မူတည်၍ ငွေကျပ် ၂၀၀၀မှ ၈၀၀၀ ထိ ကောက်ခံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ခရီးသည်များပြောသည်။
ထိုသို့ကောက်ခံနေခြင်းကြောင့် ခရီးသွားပြည်သူလူထုများနှင့် အထူးသဖြင့် တနိုင်တပိုင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကုန်သယ် ရောင်းဝယ် နေသူများအတွက် ဂိတ်ကြေးပေးဆောင်ရာတွင် အခက်တွေ့စေကြောင်း ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ကုန်သယ် နေသူ တစ်ဦးပြောသည်။
“ဂိတ်တိုင်းကို ၁၀၀၀ ဆီပေးရတယ်။ ဆိုင်ကယ် ကဆီသယ်ထားတော့ ၈၀၀၀ ပေးလိုက်ရတယ်။ ဘာမှမ ကျန်ဘူး။ အရမ်းခက်ခဲတယ်” ဟု ဆိုင်ကယ်သမား ဆိုသည်။ ယခုလို ကောက်ခံနေသောနေရာများသည် တစ်ရက် အတွင်း အသွားအပြန် သွားလာနိုင်သောဒေသဖြစ်ပြီး ပြည်သူများသည် ဆိုင်ကယ်ဖြင့် စားကုန်များ၊ ဆန်၊ ဓာတ်ဆီ၊ သံများ စသည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို မြစ်ကြီးနားမှ သယ်ယူရောင်းချနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ချီဖွေလမ်း- မန်တောင် (Man Dawng)သွားလမ်းတွင် ကားလမ်းမရှိသဖြင့် ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သာ ၎င်းကျေးရွာတွင် လိုအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းများကို သယ်ယူရချိန် ငွေပေးဆောင်နေရခြင်းကြောင့် အခက်ခဲဖြစ်စေကြောင်း ကုန်သည်က ဆိုသည်။
“ပိုက်ဆံမပေးရင်တော့ မဖြတ်ခိုင်းဘူး။ ဒါမဲ့ ဘယ်သူမှမနေချင်ဘူးလေ… အဲဒါကြောင့် သူတို့တောင်းသလောက် ပေးပြီးသွားနေတာ” ဟု KNG ကချင်သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။ ဒွမ်ဘန်ဂိတ်တွင် ရှိနေသော KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်နေ့လျှင် ကျပ် ၂၅၀၀၀ ကို တပ်ဖွဲ့အရာရှိထံ ပေးရပြီး ကျန်ရှိသော ငွေကို အသီးသီးမျှယူနေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၄င်းတို့နှင့် နီးစပ်သူ မျက်မြင် တဦးပြောသည်။ ကချင်ပြည်နယ်တွင်း အစိုးရစစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ KIA ကြား စစ်ပွဲများ စတင်ဖြစ်ပွားလာချိန်မှစ၍ KIA တပ်ဖွဲ့များသည် ထိုနေရာများတွင် ဂိတ်များချထားကာ ဖြတ်သန်းသွားလာသော ပြည်သူလူထုများထံ အခွန် ကောက်ခံ နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 11:35 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဆိုင်ရာကဏ္ဍ = စစ်ရေး, ဆင်ခြင်နိုင်ကြစေ
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ကျူးကျော်တိုက်ခိုက် လာပါကခုခံရန် ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရန်ရှိခြင်း
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာပါက ခုခံရန်အတွက် အင်အား တောင့်တင်းသည့် ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား လေ့ကျင့်ပေးလျက်ရှိပြီး ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ သန်း လေ့ကျင့်ထားရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း အတိုက်အခံ အမတ်တစ်ဦးမှ သြဂုတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။
The News Venezuelan is born !
အမျိုးသားစစ်တပ် လက်အောက်ခံ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့မှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် ၄င်းအစီအစဉ်၏ မိတ္တူတစ်စုံအား သူမအနေဖြင့် ရရှိထားကြောင်း ယခင် သမ္မတလောင်း တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုယ်စားလှယ် Maria Corina Machado က ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်၊ သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံများ၏ ကျူးကျော်မှုအား ဆန့်ကျင်သည့် ပြည်သူ့စစ်တွင် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ အားအောင်မြင်မှု ရရှိစေမည့် ဘိုလီးဗီးယားစစ် အခြေခံသဘော တရားသစ်တည်ဆောက်ရေး မဟာဗျူဟာ မြောက်ရည်မှန်းချက် ပင်ဖြစ်ကြောင်း Machado က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၄င်းသည် ကျူးဘားနိုင်ငံ၏ တိုက်တွန်းအကြံပေးမှုဖြင့် ရေးဆွဲထားသော ရှင်းလင်းသည့် စီမံချက်တစ်စောင်ပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဗင်နီဇွဲလားစစ်တပ်သည် အမေရိကန်စွက်ဖက်မှူကို ကာကွယ်ရန် စစ်အင်အားမြှင့်ရန် လုပ်ဆောင်နေသည်
အဆိုပါစစ်ရေး စီမံချက်သည် အမြဲတမ်းတပ်မတော်အား အင်အားကောင်းသည့် ပြောက်ကျားတပ်ဖွဲ့ များဖြင့် အင်အားဖြည့်တင်း အထောက်အကူပြုမည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းမှပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ၄င်းစီမံချက်သည် နိုင်ငံတစ်ဝန်း လွှမ်းခြုံကာကွယ်နိုင်ရေး လိုအပ်သည့် အင်အားရရှိ စေရန်အတွက် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁ သန်းရရှိရေးနှင့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်တွင် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၂ သန်းရှိစေရေး ဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ကြောင်း Machado က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိသော နယ်ချဲ့တို့၏ ကျူးကျော်မှုများအား ကာကွယ်ရန်အတွက် ၂ဝဝ၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူ့စစ် တပ်ဖွဲ့များအား ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းတို့သည် စစ်တပ်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ် သော်လည်း သမ္မတထံသို့ တိုက်ရိုက်တင်ပြ ဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိပါသည်။ အသက် ၅၈ နှစ်အရွယ် ချာဗက်ဇ်သည် အမေရိကန်နိုင်ငံအား မကြာခဏ ပြစ်တင်ဝေဖန်လေ့ရှိသူ ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ တို့၏ဆက်ဆံရေးမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်များအတွင်း ဆိုးရွားခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်မှစ၍ သံအမတ်ကြီးများအား အပြန်အလှန် ထားရှိခြင်း မရှိပေ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အာဏာရရှိခဲ့သော ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတ ဟူဂိုချာဗက်ဇ်သည် ကင်ဆာ ရောဂါအား ၁ နှစ်ခန့်ကုသခဲ့ ရပြီးနောက် အောက်တိုဘာလတွင် ပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပြန်လည်အရွေးခံရရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းသည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ နယ်ချဲ့ဝါဒအား ပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ၄င်း၏အစိုးရအဖွဲ့ ပြိုကွဲရေးအား ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်ဟု စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ဆွေ(လေးဝတီ) (သို့မဟုတ်) ရခိုင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်သူနှင့် နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ကန့်ကွက်မှု
“ရခိုင်မှာတပ်တွေထားတာ ရခိုင်လူမျိုးတွေကိုနှိပ်ကွပ်ဖို့လား....???ကုလားရန်က ကာကွယ်ဖို့လား??? တပ်အခင်းအကျင်းကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်သိသာပါတယ်။ ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ ငကျည်တောက် Pass မှာ တပ်ရင်း (၃)ရင်းရှိတယ်။ International Law အရ နယ်စပ်တစ်လျှောက်မှာတော့ တပ်မထားဘူး။ န.စ.က ပဲရှိတယ်။ သူတို့ဘက်ကလဲ BDR Border Defend Regiment တွေထားတယ်။အဲဒီ Border Guard အဖွဲ့က ရဟက်ယဉ်တို့၊ ဟောင်ဝစ်ဇာအမြှောက်တို့ ပိုင်ဆိုင်ထားတယ်။ မြန်မာBorder ကလက်နက်တွေထပ်တော့သာတာပေါ့ဗျာ။ ပြောချင်တာကဒီလို... အဲဒီတပ်တွေကို ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ လွှတ်တော်ထဲမှာသွားဟောင်တဲ့လူတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။........ ပြောမယ်နော်...ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေပြည်တော်တိုင်းဌာနီကမြနန်းစံကျော်ရွှေလွှတ်တော်ကြီးထဲမှာ Anti စုနာမည်မပါဘဲစကားမပြောတတ်တဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားအမတ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။ ရှေ့မှာဒေါက်ချာဘွဲ့ကြီးနဲ့။ သူ့မှာအရည်အချင်းမရှိတော့လဲ Anti စုနာမည်ခဏခဏသုံးရတာပေါ့။ ( eg: ထမင်းစားရင်သွားနဲ့ဝါးရပါတယ်လုိ့ Anti စုကပြောတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ထမင်းစားရင်သွားကိုအသုံးပြုပီးဝါးနေပါတယ်။ အပေါ့ အလေးစွန့်ရင် လူမမြင်စေနဲ့လို့ Anti စုကပြောတဲ့အတွက်လုံခြုံတဲ့အကာအကွယ်တစ်ခု ယူပီမှကျွန်တော့ကိစ္စကိုဂရုတစိုက် ဖြေရှင်းပါတယ်။ ) မခက်ဘူးလား။ Anti စုပြောသမျှအမွှန်းတင်ကော်ပီပွားနေတော့... ........Anti စုက တပ်မတော်ဆို နှုတ်ခမ်းကြီးစူစူထားတော့ သူလဲလိုက်စုကြည့်တာနေမှာပေါ့။ ဒါပေမဲ့အဲဒီသူ့ဟောင်သံကို နားမခံသာတော့တဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်တစ်ယောက်က ခဲ ကြီးကြီးတစ်လုံးနဲ့လှမ်းထုပီးသူ့အဆိုကိုကန့်ကွက်လိုက်တာဒေါက်ချာကြီး ဂိန် လို့တောင်အသံပြန်မထွက်နိုင်တော့.......သူပြောသလိုိသာ တပ်တွေတစ်ကယ်ရုပ်သိမ်းလိုက်ရင် ခုချိန်ရခိုင်မှာသူ့အမျိုးတွေတောင်ကျန်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။ စစ်ရေးအမြင်ဆိုတာအဲဒါပြောတာပဲ...ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျတော့စစ်ရေးအမြင်ရှိတဲ့လူနဲ့မရှိတဲ့လူ သိပ်သိသာသွားတယ်။ ဒေါက်ချာကြီးကြည့်ရတာ Anti စုအရှိန်ကိုတွယ်ပီး၂၀၁၅ ကိုတက်ချင်နေတာထင်ပါတယ်။မဖုံးနိုင်မဖိနိုင် မအောင့်နိုင်မအီးနိုင် သိသာလွန်းနေတယ်။ အင်း..........သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပါတီအတွက်တော့ရင်လေးတယ်....... ...။” အထက်ပါစာပိုဒ်ထဲမှ ဒေါက်ချာကြီးဆိုသည်မှာ ဒေါက်တာအေးမောင်ကို နာမ်စားသုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးနားမခံနိုင်သောပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်တစ်ဦးဆိုသည်မှာ မကွေးတိုင်းမဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁၂) မှ ဦးလှဆွေဖြစ်သည်။ ဦးအေးမောင်ကလုံထိန်းဆိုသည်မှာ အများပြည်သူကိုနှိပ်ကွပ်သောဌာနအဖြစ် သဘောဆောင်သောစကားများတင်ပြကာ ဒီမိုကရေစီခေတ်တွင်မလိုအပ်သောဌာနတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိလုံထိန်းတပ်များကိုရုတ်သိမ်းရန်အဆိုတင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သည်တွင် ဦးလှဆွေကဒေါက်တာဦးအေးမောင်၏အဆိုကို ကန့်ကွက်ကြောင်း၊ မိမိသည်ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ကိုးနှစ်နေခဲ့ကြောင်း၊ မိမိ၏သားသမီးသုံးယောက်စလုံးရခိုင်မှာမွေးခဲ့ကြောင်း၊ မိမိနှင့်ပတ်သတ်သောရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို ချစ်ခင်လေးစားသောအားဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ လုံထိန်းတပ်များကိုဖျက်သိမ်းရန် လုံးဝကန့်ကွက်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည့်အတွက် ဒေါက်တာဦးအေးမောင်၏ လုံထိန်းထပ်များရုပ်သိမ်းရေးအဆိုမအောင်မြင်ခဲ့ပေ။ တကယ်တမ်း ကုလားရခိုင်အရေးအခင်းဖြစ်လာသည့်အချိန်တွင် ဒေါက်တာအေးမောင်တို့ပါတီကပဲတစ်ခါ လုံထိန်းတပ်များနည်းပါးလွန်းကြောင်း ထပ်မံပြောကြားပြန်သည်။ လူ့စိတ်ဆိုတာ ဟိုဟာစိတ် ဆိုတော့လဲခက်တော့ခက်သည်။သို့သော်လည်းလွှတ်တော်အမတ်တစ်ဦးအနေနှင့်တော့ ယခုလောက် ဟိုဟာစိတ်မပေါက်သင့်ကြောင်း အားလုံးပဲမြင်တွေ့ကြမည်ထင့်။ဒေါက်တာဦးအေးမောင်၏ ယင်းအဆိုသာ အောင်မြင်သွားခဲ့လျှင် ယနေ့ဘင်္ဂါလီပြသနာများကို မည်သူက ဖြေရှင်းမည်နည်း။ ယင်းသည်ဒေါက်တာဦးအေးမောင်၏ ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့သောအဆိုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်သည်။ ယခု NLDပါတီမှ ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏ်ဏစိုးက ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် မှတ်ပုံတင်စစ်ခြင်းများပြုလုပ်ရန်အဆိုတင်သွင်းလာပြန်သည်။ယင်းအဖြစ်အပျက်ကိုလည်း ကျွန်ုပ် ကြက်ဥပုံနှင့်တကွ status တင်ခဲ့ဖူးသည်။ “NDFအမတ် တစ်ဖြစ်လဲNLDအမတ် ၀က်ဖျံနာဆိုးက ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့တဲ့ အဆိုတစ်ရပ်ကိုဒီနေ့တင်တယ်...သူ့အဆိုက နိုင်ငံခြားသားတွေကိုစီမံချက်ကြီးချပီး မှတ်ပုံတင်စစ်မလို့တဲ့...မြန်မာ့သမိုင်းမှာလဲ နဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးတို့၊ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေးတို့လုပ်ပီး စစ်ဆေးခဲ့ဖူးတဲ့သာဓကရှိတယ်လို့ပြောတယ်...အနောက်ဘက်က တိုင်းပြည်ဧရိယာကျဉ်းကျဉ်းလေးနဲ့လူဦးရေပေါက်ကွဲနေတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုက နိုင်ငံခြားသားတွေဟာ မြန်မာပြည်ထဲကို လှိမ့်ဝင်လာပီး လူမြိုလို့လူမျိုးပျောက်တော့မယ်လို့ ထည့်ပြောသွားတယ်...အခုအချိန်မှာ မြန်မာပြည်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်သောပုဂ္ဂိုလ်များမှတ်ပုံတင်စစ်ဖို့အချိန်တန်ပီလို့ဆိုပါတယ်...A Little Knowledge is dangerous ဆိုတာဒါမျိုးမှအစစ်...အဲဒီအဆိုကိုမကွေးတိုင်းကြံခိုင်ရေးဂန့်ဂေါအမတ် ဦးလှဆွေကကန့်ကွက်သွားတာတွေ့ရတယ်...ကန့်ကွက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကလူမျိုးရေးအထိကရုဏ်းဖြစ်လို့ ပုဒ်မ (၁၄၄) မရုတ်သိမ်းရသေးကြောင်း...မနေ့ကတောင်ကျောက်တော်မှာမီးရှို့သေးကြောင်း...အခုချိန်မှတ်ပုံတင်သွားစစ်ရင် မီးလောင်ရာလေပင့်သလိုဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်း...ယခင်ကနဂါးမင်းစစ်ဆင်ရေးဆိုသည်မှာယခုကဲ့သို့မှတ်ပုံတင်စစ်သောစစ်ဆင်ရေးသာဖြစ်ကြောင်း...ထိုသို့မှတ်ပုံတင်စစ်သောကြောင့် အစစ်မခံနိုင်သော ဘင်္ဂါလီများ ထွက်ပြေးသဖြင့်နိုင်ငံတကာမှ ဖိအားပေးကြောင်း...ထို့ကြောင့်ပြန်လာနားပါဆိုသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဟင်္သာစစ်ဆင်ရေးအမည်သုံးပြီး ပြန်လက်ခံခဲ့ရကြောင်း...ထွက်ပြေးတာက (၃)သိန်း၊ ပြန်လက်ခံရတာက (၅) သိန်းဖြစ်ကြောင်း...ယခုကိစ္စသည်ရုတ်တရက်ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ရန်မလိုသေးပဲ ပုံမှန်လုပ်ရမည့်ကိစ္စဖြစ်ကြောင်း..ယခုအချိန်တွင်အထွေထွေအခြေအနေအရ အကဲဆတ်သည့်အနေအထားဖြစ်သောကြောင့်ဒီအဆိုကိုဆွေးနွေးရန်မသင့်ကြောင်း...မှတ်ပုံတင်မရှိသောဘင်္ဂါလီများထွက်ပြေးလျှင် ရိုးရိုးထွက်မပြေးပဲ မီးရှို့သတ်ဖြတ်လုရက်ပီးမှထွက်ခွာလေ့ရှိသောကြောင့်ခံစားရသည်မှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသာဖြစ်ကြောင်း...မိမိတို့က လွှတ်တော်ထဲတွင် ဆင်ခြင်တုံတရားကင်းမဲ့စွာဖြင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးမိပါကတစ်ကယ်တမ်းမြေပြင်တွင် လက်တွေ့ခံရမည့်သူမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားများသာဖြစ်ကြောင်း...ထို့ကြောင့်ကန့်ကွက်ကြောင်း...တင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရတယ်...ဒီကိစ္စလွှတ်တော်ဥက္ကဌကမဲခွဲတော့ (၂၂၀)မှာ ၀က်ဖျံနာဆိုး ကိုထောက်ခံတဲ့သူက (၂၁)မဲ.....ဒါအန္တရယ်ရှိတဲ့အဆို...တိုင်းပြည်အတွက်အကျိုးယုတ်စေမဲ့အဆို...ရခိုင်ပြည်နယ်ငြိမ်သက်မှုမရှိစေမဲ့အဆို..ရခိုင်ပြည်ကိုကယ်တင်တာလိုလိုနဲ့ကုလားရှေ့ကိုချကြွေးတဲ့အဆိုဖြစ်တဲ့အတွက်...ဒီအဆိုတင်တဲ့သူကိုအံ့သြမိပါတယ်....လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတာအကွက်ကြိုမြင်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်...အရာရာကိုလေးငါးကွက်လောက်ကြိုမြင်နိုင်မှ ရှေ့မှာဖြစ်လာမဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကိုအချိန်မီကာကွယ်နိုင်ပီး...ကောင်းကျိုးတွေကိုလဲ လမ်းသာသာနဲ့ဖောက်လုပ်သယ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်...ဒီအဆိုကိုဝက်ဖျံနာဆိုးကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့တင်တာလဲ??? လုံးဝနားမလည်ဘူး....မှတ်ပုံတင်စစ်မယ်ဆိုရင် ရခိုင်ကကုလားတွေအကုန်ထွက်ပြေးတော့မယ်...ရခိုင်မှာဆိုတာက ကုလားတွေထွက်ပြေးရင် (ရခိုင်မှာနေဖူးတဲ့လူတွေသိမှာပါ)လူသတ်...မုဒိန်းကျင့်...မီးရှို့...အဲလိုမထူးဇာတ်ခင်းပီးမှပြေးလေ့ပြေးထရှိတာ...အကယ်ရွေ့ နိုင်ငံတကာကဖိအားတွေပေးလို့ပြန်ခေါ်ခဲ့ရသည်ရှိသော်...ထွက်သွားတာက တစ်ပြည်....ပြန်ဝင်လာတော့ တစ်တင်း မကဘူးဖြစ်သွားမယ်...အဲဒီကျရင်သူတို့ပဲလူ့အခွင့်အရေးလိုလို...ကုလားလဲလူပါပဲလိုလို...မမြင်တာလိုလို...မသိတာလိုလို....မကြားတာလိုလို....လိုလိုတွေနဲ့လက်ရှောင်အုံးမှာ...သိနေတယ်....မစစ်ရဘူးမဟုတ်ဘူး....စစ်...ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာလုပ်လို့ဘယ်ရမလဲ...ပိုပီးပွဲဆူသွားမယ်...ဒါမျိုးအဆိုကဒီအချိန်မှာလက်ခံဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်သင့်တာ...လက်ခံဆွေးနွေးပီးရလဒ်ကိုနောက်ထား...ဆွေးနွေးနေပီဆိုရင်ကိုကုလားတွေကပြေးဖို့ပြင်တော့မှာပဲ....သူတို့ကတော့လွှတ်တော်ထဲမှာ အဲယားကွန်းလေးနဲ့ ဇိမ်လေးနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ယုံပဲ...တစ်ကယ်လက်တွေမြေပြင်အခြေအနေမှာ ခံစားရမှာကရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပါ....ဒါတွေကိုသူကြိုမမြင်ဘူးလား...မတွေးမိဘူးလား....ဒီလိုအတိမ်းအစောင်းမခံတဲ့ critical အချိန်မျိုးမှာ ဒီအဆိုကိုဝက်ဖျံနာဆိုးကဘာလို့တင်တာလဲ...အတွေးအရမ်းတိမ်တယ်....သူကတင်တယ်ဆိုရင်တောင် သူတို့ပါတီဥက္ကဌ Anti စုမကန်ကွက်ဘူးလား...ဘာတွေလုပ်နေလဲ...Anti စုရဲ့သဘောထားကဘာလဲ???သိပ်သိချင်တယ်......မှတ်ပုံတင်စစ်တယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်စစ်စစ်ရပါတယ်ဗျာ...ကားဂိတ်တွေ...လေဆိပ်တွေ...သင်္ဘောဆိပ်တွေမှာစောင့်စစ်ရင်လွယ်ပါ့...မှတ်ပုံတင်မရသင့်ပဲရတဲ့သူကိုဘယ်သူထုပ်ပေးထားသလဲ(လိုချင်လွန်းလို့လျှောက်ရင်တောင်လျှောက်တိုင်းရချင်မှရတာ) ...လက်မှတ်ထိုးပေးရင် အဲဒီလိုထိုးပေးတဲ့အကျင့်ပျက် လ.၀.က၀န်ထမ်းကိုအရေးယူလိုက်ပေါ့....တစ်ကယ်နားမလည်တာက....၀က်ဖျံနာဆိုး ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ...သူတို့ဥက္ကဌAnti စုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲကိုလား???NLDပါတီရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ?????...တရုတ်ကိုလား???...ကုလားကိုလား???..ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကိုပိုမိုဆူပူလှုပ်ရှားအောင်လုပ်စေချင်တာလား???.....ရခိုင်ကိုကယ်တင်လိုက်သလိုလိုနဲ့ ကုလားရှေ့မှာချ ကြွေးလိုက်တာဘာသဘောလဲ???.ကဲန်တားနားကအထွက်...တူရကီဝန်ကြီးချုပ်ကတော်ကအရောက်..၀က်ဖျံနာဆိုးကအဆိုအတင်...အားလုံးကွက်တိပါပဲဗျာ....အမျှော်အမြင်ရှိတဲ့လွှတ်တော်က'ဒီရှုပ်ရဲ့ရေတိမ်အတွေးထဲကရခိုင်ကိုလက်မတင်ကလေးကယ်တင်လိုက်နိုင်တယ်ထင့်.....အားလုံးလဲဝေဖန်ကြပါအုံး....” အထက်ပါစာပိုဒ်တွင် ကန့်ကွက်ခဲ့သူမှာလည်း ဦးလှဆွေပင်ဖြစ်သည်။ “ဒီအဆိုကို ပုဒ်မ ၁၄၄ ရုပ်သိမ်းပြီးမှ ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ လတ်တလောဆွေးနွေးရင် မီးလောင်ရာ လေပင့်သလို ဖြစ်နေပါတယ်။မတည်ငြိမ်၊ ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မနေ့ကပဲ ကျောက်တော်မှာ မီးရှို့မှု ဖြစ်သွားပါတယ်။ တပ်မတော်နဲ့ ရဲနဲ့ပဲ အလုပ်ရှုပ်ပါတယ်။ အဆိုမှာပါတဲ့အလုပ်က အခုမှ လုပ်ဆောင်သင့်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အမြဲတမ်း ပုံမှန်လုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါ။ ဆူပူမှု အကဲဆတ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့လွှတ်တော်အနေနဲ့ မဆွေးနွေးသင့်သေးဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ လတ်တလော မွတ်စလင်နိုင်ငံတွေက စောင့်ကြည့်နေတာ ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခံနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် လတ်တလောဆွေးနွေးဖို့ အချိန်စောနေ ပါသေးတယ်' ”ဟုချေပကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ လွှတ်တော်ထဲတွင် ယင်းအဆိုနှင့်ပတ်သတ်ပီး ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ရပ်ရပ် မချမှတ်ခင်မှာတင် မှတ်ပုံတင်မရှိသော ကုလားများမှာ ရခိုင်ပြည်ကိုသွန်လိုသွန်မှောက်လိုမှောက် ကန်ကျောက်ထွက်ပြေးကြပေလိမ့်မည်။ ယင်းသို့ဖြစ်လာလျှင် အစိုးရကမည်သို့ပင်ညင်ညင်သာသာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းစေကာမူ ကမ္ဘာအ၀ှမ်းရှိ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံများ ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်လာနိုင်ပီးဘာသာရေးစစ်ပွဲလုံးလုံးအသွင်သို့ လက်ငင်းပြောင်းလဲသွားနိုင်သလို မြေပြင်အခြေအနေရှိရခိုင်တိုင်းရင်းသားများလည်း အနည်းနှင့်အများထိခိုက်နစ်နာပေဦးမည်။ ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏ်ဏစိုး၏ တိမ်လွန်းသောအတွေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ commentator များပြောသကဲ့သို့ပင်ရှေ့ရေးကို ကြိုတင်မတွေးဆပဲ မျက်တောင်တစ်ဆုံးကြည့်ချက်များနှင့် လူထုလက်ခုတ်သံကိုမျှော်ကာလူကြားကောင်းမည့်အဆိုကိုတင်သွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သလို လွှတ်တော်ထဲသို့တစ်နှစ်ခွဲလောက်စောစီးရောက်ရှိနေသောဒေါက်တာမြတ်ဥာဏ်ဏစိုးက အချင်းချင်း လူစွမ်းကောင်းလုပ်ပြချင်သည့်ကလေးအထာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ NLD ပါတီတွင် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာကိစ္စများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီနှင့်လွှတ်တော်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားသည်။ လွှတ်တော်ရေးရာကော်မတီတွင် ဦးဥာဏ်ဝင်း(ဥက္ကဌ)၊ ဦးစိုးဝင်း(အတွင်းရေးမှူး)တို့ကတာဝန်ယူကာဖွဲ့စည်းထားကြောင်းသိရပီး လွှတ်တော်တက်ရောက်သည့်ကိစ္စနှင့် တင်သွင်းမည့်အဆိုများကို စိစစ်ရန်ဝလမ်းညွှန်ရန်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်းသိရသည်။ ယင်းအဖွဲ့၏ လမ်းညွန်မှု၊ စိစစ်မှုတို့ကိုလည်း အတိုင်းမသိစိတ်ပျက်မိသည်။ လေသည်။စင်စစ် ဦးလှဆွေသည် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်လူမျိုးများအတွက် အမှန်တကယ်အန္တရယ်ကြီးမားသော အဆိုနှစ်ရပ်ကို ခဲရာခဲစစ်အောင်မြင်အောင်ကြိုးစားကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်သော်လည်း ရခိုင်ပြည်တွင်နှစ်ရှည်လများနေခဲ့ဖူးသူ (မိမိကဲ့သို့ပင်)ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ် မဂ္ဂဇင်းများတွင် တောသဘာဝ၊ သံသယဆိုတာ( ကျွန်ုပ်ဖတ်ဖူးသလောက်၊ လက်လှမ်းမီသလောက်)၀တ္တုတိုများကိုရေးသားသော စာရေးဆရာ ဆွေ(လေးဝတီ) ဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရသည်။ ရခိုင်ပြည်၏ ၀တီလေးရပ်ကို ကိုယ်စားပြုသည့်လေးဝတီနာမည်ကိုခံယူထားသော ကလောင်ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်သောသူနှင့် မချစ်သောသူ အနည်းငယ်တော့ကွာပေလိမ့်မည်။ဦးလှဆွေကို မည်သည့်ရခိုင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါသနည်း။ ဒေသခံရခိုင်များလား၊ နိုင်ငံရေးရခိုင်များလား။ နိုင်ငံရေးရခိုင်များသည်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလာရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ကိုပင် ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြောင်း သမိုင်းတွင်ပြန်လှန်ကြည့်နိုင်သည်။ လက်ရှိတွင်ရခိုင်ကိစ္စဟူသမျှကို ပယ်ပယ်နှယ်နှယ် တင်ပြဆွေးနွေးရမည့် ရခိုင်အမတ်များသည် ရန်ကုန်တွင်နေသော အမတ်လား၊ရခိုင်တွင်နေသောအမတ်လား။ ရန်ကုန်တွင်နေသော ရခိုင်အမတ်များသည် တခါက ရခိုင်ပြည်တွင်နေထိုင်ခဲ့ဖူးသော မကွေးအမတ်လောက်ပင်ရခိုင်ပြည်ကိုထည့်သွင်းထောက်ညှာခြင်း၊ မြတ်နိုးချစ်ခင်ခြင်း မရှိကြောင်း ၀မ်းနည်းစွာမြင်တွေ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် NLD နှင့် ရန်ကုန်နေနိုင်ငံရေးရခိုင်အမတ်၊ တစ်ဘက်တွင် ၊ ဒေသခံရခိုင်များနှင့် ဦးလှဆွေ ၊ သေသေချာချာခွဲခြားသုံးသပ်ကြပါလေ။ ယင်းသို့ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းများသည် နိုင်ငံရေးအားပြိုင်ခဲ့ခြင်းများအတွက် ရှေ့နောက်မစဉ်းစားကာ ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းများ ဟုတ်မဟုတ် အများပြည်သူအပေါင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါလေ။ မှတ်ချက်( ကြံခိုင်ရေးပါတီ၏ အမတ်တစ်ဦးဖြစ်သော်လည်း ပါတီအမည်မကြာခဏထည့်သုံးလျှင် ဖွတ်လံဖား၊ စစ်ခွေး၊ စစ်ကျွန်၊ ဒီပဲရင်းလက်ကျန်တစ်ဦးအဖြစ် ကျွန်ုပ်အားစွတ်စွဲကြပေအုံးမည်။ ယခုကဲ့သို့ ပါတီနာမည်မသုံးပဲ ရေးသားခြင်းများကိုလည်း ဆွေ(လေးဝတီ)အားPromotionဆင်းသည်ဟု ကွက်ဖေါ်ကြပေလိမ့်အုံးမည်။ စိတ်ချမ်းသာသလိုသာ မြင်ပါလေ။ ကျွန်ုပ်သည်လည်း ရခိုင်တွင်မွေး၊ ရခိုင်တွင်ကြီးကာ၊ရခိုင်ချစ်မြန်မာတစ်ဦးဖြစ်သည့်အလျှောက် ရခိုင်ဒေသခံများနှင့် ထပ်တူ ဆွေ(လေးဝတီ) ဘက်မှ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်ပါကြောင်းဒီနေရာမှတစ်ဆင့် အသိပေးပြောကြားလိုက်ရပါသည်) တရားကိုမှတ်၊ ဓါးကိုလက်ကိုင်၊ အရိုးကျေကျေအရေခမ်းခမ်း၊ လေးဝတီိကိုဆုံးခန်းတိုင်အောင် တို့စွမ်းထက်ထက်ကာကွယ်ကြစို့လား။
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 7:42 PM2ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post
ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုေ၇းဖြစ်တာကလဲ ဖေ့ဘုတ်မှာ ဆရာကြီးတစ်ဦး၏ ပညာရေးဌာနက ဓါတ်ပုံတွေ တွေ့ရင်း၊ ကြည့်ရင်းကေ၇းဖြစ်သွားတာပါ။ ကွန့်မင့်လဲပေးရင်းကနေ စာရှည်သွားလို့ notes အနေနဲ့ ပြောင်းေ၇းလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လူမှုဘ၀တွေ ဖြတ်သန်းရာမှာ ပညာေ၇းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အလွန်မတန်မှ အေ၇းပါ ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ကျွန်တော်တို့တွေ အားလုံးက ငယ်စဉ်က ဘယ်လိုရည်မှန်းထားခဲ့ ရည်မှန်းထားခဲ့ တကယ့်တကယ် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရတာက ၁၀ တန်းအောင်ပြီးမှပါ
။ ကဲ ၁၀ တန်းအောင်ပြီဆိုရင်ပဲ မိမိကိုယ်တိုင်ေ၇ာ မိဘဆွေမျိုးတွေကပါ ဘာတွေလုပ်ချင်လဲ၊ ဘာတွေလုပ်နိုင်လဲ၊ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ စသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပြီး ဘယ် တက္ကသိုလ်တက်မယ် စသဖြင့် ရွေးချယ်ကြတာပါ။ ၁၀ တန်း မအောင်တော့ဘူး မဖြေတော့ဘူးဆိုသူများအတွက်ကလဲ တစ်မျိုးပေါ့။ ကျွန်တော့ အနေနဲ့က ၁၀ တန်းအောင်ခါစ လူငယ်တွေ တက္ကသိုလ်ရွေးချယ်ကြပုံလေးနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ပြောချင်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ပညာ၇ပ်တွေ အားလုံးက ဘယ်လိုပြောရမလဲ လာဒ်လာဘနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ဟော့မဖြစ်သေးတော့ ကျောင်းပြီးရင် ပြီးခြင်း အဆင်ပြေစေမယ့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ပညာကိုပဲ မိဘတွေက တက်စေချင်တယ် တွန်းအားလဲ ပေးကြပါတယ်။ မိမိရဲ့ကလေးက ဘာလုပ်ချင်မှန်းမသိ အတင်းတွန်းတိုက်ပြီး ဇွတ်ေ၇ွးချယ်ခိုင်းကြတယ်။ အဲတော့ တချို့ ဘာသာရပ် နယ်ပယ်တွေမှာ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးနဲ့ ကြည့်ရင် အားနည်းသွားတယ်။ အဲတော့ ထုံးစံအတိုင်းပဲ ငယ်ငယ်က သားသား မီးမီး ကြီးရင်ဘာလုပ်မယ် မေမေ၊ ဖေဖေ မေးရင်ကွယ် စသဖြင့်ပေါ့ မေးကြရင် အား .. တခါထဲ ... ဒီ ကျောင်းပြီးရင် တစ်ခါထဲ အဆင်ပြေစေမယ့် ဟော့ဖြစ်တဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ပညာပဲလုပ်ချင်ကြ မိဘကလဲ လုပ်စေချင်ကြတော့တယ်။
သူတို့ကြီးရှိနေလို့လဲ တိုင်းပြည်က တိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ေ၇းမှာ ဘက်စုံထေါင့်စုံက ဟာကွက်မရှိ တိုးတက်ဖို့လိုတယ်။ ဟိုတလောက စကိုင်းနက်ကြည့်တော့ မိတ္ထိလာက ဆုတွေရတဲ့ အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာ အင်တာဗျူးလုပ်တယ် အတန်းတွေထဲမှာ အင်တာဗျူးကောင်မလေးက မေးတယ် သမီးလေးကြီးရင် ဘာလုပ်မှာလဲ သမီးတဲ့ ကောင်မလေး တစ်ယောက်ကပြောတယ် သမီး ဆရာဝန်အဆိုတော် လုပ်မယ်တဲ့။ ဒါလဲ ကောင်းပါတယ် ကောင်းပါတယ် သူလဲ အခုခေတ် ဆရာဝန်အဆိုတော်တွေ ထဲက အောင်မြင်နေသူတွေကို အားကျလို့လဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။ ကောင်းပါတယ် သမီးလေးကြိုးစားပါ ..........း) တစ်ခါက ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တော့ မေမေက ငါ့သားရယ် နင့်ညီဝမ်းကွဲ တစ်ယောက်ကတော့ အဝေးသင်လေးတက် ဘွဲ့လေးရပြီး လယ်ဘဲထွန်ရတာပါပဲ နောက်ဆုံးတော့ ဟုပြောတော့ ကျွန်တော် မေမေကို ပြန်ပြောဖြစ်တယ်။ မေမေ လယ်ထွန်တဲ့သူတွေ ထဲမှာေ၇ာ ဘွဲ့ရတွေမလိုအပ်ဘူးလားလို့ ပြန်မေးမိတယ်။ ဘွဲ့ရတဲ့ သူတွေလဲ လယ်အလုပ်လုပ်မှ သူတို့ စဉ်းစားဥာဏ်တွေနဲ့ လုပ်မှ အထွက်တိုးတော့မပေါ့ဟု ပြောဖြစ်တယ်။ မေမေအသံခဏ တိတ်သွားပြီး အေးပါ ဖအေ လေးရယ်ဟုသာ ကျွန်တော့ကို ပြန်နောက်၏။
တကယ်တော့ ကျောင်းက သင်ပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာ ဗဟုသုတ၊ စဉ်းစားဥာဏ်၊ လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံေ၇း စသည့်အခြေခံအချက်အလက်တွေပါပါတယ်။ ဘယ်ကျောင်းပြီးရင်တော့ ဘယ်ဟာကို လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တကယ့်တကယ် အလုပ်ထဲမှာ ၅၀ ပါဆင့်တောင် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်မှဒါ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်ထဲမှာ ပြန်လည်သင်ယူရင်း အတွေးအကြုံတွေနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာ တိုးတက်လာတာပါ။ ဥပမာ တကယ်လို့သာ လယ်ထွန်တဲ့ အထဲမှာေ၇ာ ဥပဒေဘွဲ့ရတဲ့ သူတွေ လယ်ထွန်နေရင် ကဲအခုတလော ဖေ့ဘုတ်မှာ ဟော့နေတဲ့ လယ်သိမ်းခံရတဲ့ သတင်းတွေကြားရတာ နည်းသွားမှာပဲမဟုတ်လား။ ကျွန်တော်က နယ်က တောသား တစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်က သီးထပ် သီးညှပ် စိုက်ပျိုးရေး စနစ်တွေကို အခု ခေတ်အခါလို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ဟောပြောလှုံဆော်မှုတွေ မရှိသေးပါဘူး (အခုတော့ ပညာပေးဟောပြောပွဲတွေ စံပြစိုက်ကွက်တွေနဲ့ သေချာလုပ်နေပြီလို့တော့ထင်တာပဲ)။
ဒေသက မိုးနည်းတဲ့ ဒေသဆိုတော့ မိုး၇ွာတဲ့အခါ တောင်ကျ ချောင်း၊ ချောက်၊ မြောင်းတွေကိုေ၇လွှဲတမန်တွေ လုပ်ပြီးတော့ေ၇သွင်းစိုက်ရတာမျိုးပါ။ ဆောင်းနှောင်းပိုင်းေ၇ာက်လို့ စပါးတွေ သိမ်းပြီးရင် လယ်ကွင်းတွေက ကောက်ရိုးပြတ်တွေနဲ့ ဘာမှအလုပ်မဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော့ မိဘတွေခေတ်အခါက ကျွန်တော်တို့ တောမြို့နယ်တွေမှာ ၁၀ တန်းအောင်ဆိုတာ အလွန်မတန်ှရှားပါတယ်။ ၂ နှစ်လောက်မှ ၁ ယောက်လောက် အောင်စရင်းထဲ ပါတဲ့ အခြေအနေပါ။ အဖေက ၁၀တန်းထိ ကျောင်းတက်နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ၁၀ တန်းတော့ အောင်မြင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်လည်း သူဝါသနာပါတဲ့ စိုက်ပျိုးေ၇း စာပေတွေ ဖတ်ခဲ့တယ်။ စာအုပ်တွေ အိမ်မှာ တပုံတပင်ကြီးပါ။ ပြီးတော့ သူဘာတွေလုပ်သလဲဆိုတော့ သီးထပ် စိုက်ပျိုးေ၇းကို စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ စပါးစိုက်တဲ့အခါ အထွက်လဲကောင်း အသက်လဲရင်(သက်တမ်းတို)တဲ့ စပါးကိုရွေးစိုက်ခဲ့တယ်။ စပါးတွေ သိမ်းပြီးလို့ မြေမခြောက် သခြောက်ကို ထယ်နဲ့ထိုးပြီး ကုလားပဲတွေ စိုက်ခဲ့ပြီး နှစ်သီးစား စလုပ်ခဲ့တော့ ကျွန်တော် မှတ်မိနေသေးတယ် အဖေ့ကို ရွာကလူတွေနဲ့ အဖိုးကပါ အရူး ဟု ကင်ပွန်းတပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆောင်းနှောင်းပိုင်း ချောင်းေ၇တွေကျသွားတော့ ဘာမှ လုပ်လို့မရတဲ့ ချောင်းသဲခုံတွေပေါ်မှာ ကြက်သွန်တွေ စိုက်ပြခဲ့တုန်းကလဲ ထိုသို့ပင်။ နောက်တော့ ရမှန်းလဲသိေ၇ာ အရူးလုပ်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ချင်ကြလို့ (သူစိုက်ချင် ငါစိုက်ချင်နဲ့ စိုက်ချင်ကြလို့) နေရာလုရင်းက အမျိုးအချင်းချင်း တ၇ားပါရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့ ကိန်းဆိုက်တယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ် မချမ်းသာပေမယ့် အဆင်ပြေပြေလေး နေနိုင်အောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပေးခဲ့တဲ့ အဖေ့ကို အများကြီးကျေးဇူးတင်လို့ မဆုံးပါဘူး။ ကျွန်တော်တစ်ခါ နယ်ကိုပြန်ေ၇ာက်တော့ နယ်မှာ လူငယ်လူရွယ်တွေ လူလတ်ပိုင်းတွေ မရှိသလောက်ရှားတယ်။ မလေးရှား၊ ထိုင်း၊ စတဲ့နိုင်ငံတွေကို အလုပ်တွေ ထွက်လုပ်လိုက်ကြတာ တချို့လဲ အဆင်ပြေလို့ အိမ်လေး အုတ်ပတ်ကားတက်(တိုက်ခံအိမ်) သွပ်မိုးလေး ဆိုင်ကယ်လေးနဲ့ပေါ့၊ တချို့လည်း အဆင်မပြေလို့ အေးဂျင့်ခကုန် ပင်းပန်းဆင်းရဲစွါနဲ့ ဘာမှမဖြစ်ပဲ ပြန်လာကြတဲ့သူတွေလဲ တွေ့ရတယ်။ တချို့လည်း လုံးလုံးပျောက်ပြီး သေလားရှင်လားမသိပဲ အဆက်အသွယ်မရတဲ့သူလဲရှိတယ်။ တခု သတိထားမိတာက လူငယ်လူလတ်တွေတော့ တော်တော်ကို နည်းသွားတယ် ယောင်္ကျား မိန်းမ အကုန်ပါပဲ။ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားတွေ၇တာပေါ့ဆိုပေမယ့် ကျွန်တော် တော်တော် ရင်လေးမိတယ်။ တနေ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ညီလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့တော့ အကြောင်းစုံမေးကြ မြန်းကြရင်းက အစ်ကိုရာတဲ့ အစ်ကိုပြောသလို ကျွန်တော်တို့ နယ်မှာ လူနဲသွားတာဟုတ်တယ်ဗျတဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ သူများတွေ အေးဂျင့်တွေကို ပေးရတဲ့ ငွေသိန်း ၂၀ ကို ရင်းပြီးတော့ နာနတ်တွေ စိုက်တယ်ဗျာတဲ့ နာနတ်စိုက်တာကတော့ အဓိကပေါ့တဲ့ ပြီးတော့ ရာသီပေါ် သီးနှံတွေစိုက်တယ်တဲ့ သရက်လည်း စိုက်တယ် အခု သနပ်ခါးတွေ စစိုက်နေပြီတဲ့။ တနိုင်တပိုင်လည်း မွေးမြူေ၇းလေးလုပ်တယ်တဲ့။ အခု ၃ ၄ နှစ်ရှိပြီတဲ့။ နာနတ်စိုက်ခင်းနဲ့ကို တော်တေ်ာ အဆင်ပြေတယ်တဲ့။ အဲတုန်းက ဂျစ်ကားတစ်စီးကို ၇၀ လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ သူပိုင်နေပြီ။ သူပြောတာက ဘယ်လို ဖြစ်ဖြစ်အစ်ကိုရာတဲ့ ကျွန်တော် ကံကောင်းလို့လဲ ဖြစ်ချင် ဖြစ်မှာပါတဲ့။ သူများတွေ အပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်တာ အဆင်ပြေသလောက်တော့ ပြေတယ် တခုကျွန်တော် မြတ်တယ်ဗျတဲ့ အဲတာကတော့ ကျွန်တော့ မိသားစုနဲ့ အတူတူနေရတယ် အစ်ကို၇ာဟု ပြောရာ ကျွန်တော် တော်တော် ၀မ်းသာမိပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ အစိုးရက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်းတွေ လုံလောက်အောင် မရှာဖွေပေးနိုင်ပါဘူး လက်ခံပါတယ်။ ဘွဲ့ရ အလုပ်မရှိဆိုတဲ့ စကားကိုတော့ ကျွန်တော် လက်မခံပါ။ ဘွဲ့ရပါလျှက်နဲ့ အလုပ်မလုပ်ရင်တော့ အလုပ်က ရလာမည်မဟုတ်ပါ။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ လူငယ်လူရွယ်တွေ အနေနဲ့ ကိုယ့်သန်ရာ သန်ရာ ၀ါသနာပါရာ ပညာ၇ပ်တွေမှာ အစဉ်မပြတ် ကျိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ ... လူငယ်လူရွယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ ပါတာပေါ့ဗျာ သတိထားပါတယ်။ ဟူး ... အကျိုးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်သွားလို့ ပြောရင်းက များသွားတယ်ဗျာ ... ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်ကြီး ဘက်စုံထောင့်စုံမှာ ပညာရှင်တွေ ပေါ်ပေါက်ပြီး ဘက်စုံထောင့်စုံက တိုးတက်တဲ့ တိုင်းပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းလိုက်၇ပါတယ်ဗျာ ...................... အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..........
ရေးသားသူအဖွဲ့= မောင်ကျောက်ခဲ အချိန်= 3:20 PM 1 ယောက် ဆွေးနွေးခဲ့တယ် Links to this post